ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ – Yangon Hluttaw
Home / ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သတင်းများ / ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ
Ygn Editor August 21, 2017	ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သတင်းများ, အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း 37 Comments 716 Views
၁၃၇၈ ခုနှစ်၊ တန်ခူးလဆန်း ၁ဝ ရက်
( ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၆ ရက် )
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်အစည်းအဝေးခန်းမတွင် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကို နံနက်(၁ဝဝဝ)နာရီအချိန်၌ စတင်ကျင်းပပါသည်။ [ ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဦးတင်မောင်ထွန်းမှ ဆောင်ရွက်ပြီး အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် လွှတ်တော်ရုံးအကြီးအမှူး ဒေါ်ကြည်ကြည်ဆွေမှ ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ]
အခမ်းအနားမှူး ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန် အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကျင်းပရန် အချိန်နီးကပ်လာပြီဖြစ်ပါ၍ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ နေရာယူပေးကြပါရန် ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ အစည်းအဝေး အထမြောက်ကြောင်းနှင့် အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်းကြေညာခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့မှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် စိစစ်ရေးကော်မတီရဲ့တင်ပြချက်အရ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ စုစုပေါင်း (၁၂၃)ဦးရှိပြီး ဒီကနေ့အစည်းအဝေးကို (၁၁၅)ဦး တက်ရောက်ပါတယ်။ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေစုစုပေါင်း၏ (၉၃.၅ဝ)ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်ပြီး တက်ရောက်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေဟာ အစည်းအဝေးအထမြောက်ရန်လိုအပ်တဲ့ ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ သုံးပုံတစ်ပုံ ကျော်လွန်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၃၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ အစည်းအဝေးအထမြောက်ကြောင်းနှင့် နည်းဥပဒေ ၃၅၊ နည်းဥပဒေခွဲ (ဂ)အရ အစည်းအဝေးစတင်ကျင်းပကြောင်း ကြေညာပါတယ်။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ကြေညာခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ခ)အရ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေးရဲ့ သတ္တမနေ့ အစီအစဉ်ကို လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များထံ ကြိုတင်ဖြနေ့်0xm;ပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားပါမယ်။
ဗိုလ်မှူးဟိန်းဇော်၊ အဖွဲ့ဝင်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးဟိန်းဇော် ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကို မတက်ရောက်နိုင်တဲ့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၇)ဦးကိုယ်စား ခွင့်ပန်ကြားခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းသည် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက်၊ ကရင်တိုင်းရင်းသားဝန်ကြီး ဒေါ်နော်ပန်းသဉ္ဇာမျိုးသည် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးမော်သည် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန်ကိစ္စရှိပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်မင်းမင်းသည် ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မြင့်သည် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက်၊ မင်္ဂလာဒုံမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်သန္တာမိုးသည် ကျန်းမာရေးမကောင်းပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဘုန်းကျော်ဇံဦးသည် ကိုယ်တိုင် ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် ၆.၄.၂ဝ၁၇ ယနေ့ ခွင့်(၁)ရက် ခွင့်ပြုပေးနိုင်ပါရန် လေးစားစွာတင်ပြအပ် ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ယနေ့ခွင့်ပန်ကြားသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်(၇)ဦးတို့၏ ခွင့်ပန် ကြားချက်များကို ခွင့်ပြုရန် လွှတ်တော်ကသဘောတူပါသလားခင်ဗျား (သဘောတူပါတယ်)။ သဘောတူတဲ့အတွက် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များရဲ့ ခွင့်ပန်ကြားချက်များကို လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒီကနေ့ကျင်းပတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးရေ (၁၂၃)ဦး၊ ဒီကနေ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ (၁၁၅)ဦး၊ ယမန်နေ့ကခွင့်ပန်ကြားသူ (၁)ဦး၊ ယနေ့ခွင့်ပန်ကြားသူ(၇)ဦး၊ စုစုပေါင်းခွင့်ပန်ကြားသူ(၈)ဦးကို လွှတ်တော်က ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ခွင့်မဲ့ပျက်ကွက်သူမရှိပါ။ တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေ ၄၊ နည်းဥပဒေခွဲ(ဂ)၊ နည်းဥပဒေခွဲငယ်(၂)အရ ယခု လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အခြေအနေတင်ပြချက်ကို လွှတ်တော်၏ အတည်ပြု ချက်ရယူပါမယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု အခြေအနေတင်ပြချက်ကို အတည်ပြုပါသလားခင်ဗျား (အတည်ပြုပါတယ်)။ အတည်ပြုပါသလား ခင်ဗျား (အတည်ပြုပါတယ်)။ အတည်ပြုပါသလားခင်ဗျား (အတည်ပြုပါတယ်)။ လွှတ်တော်က အတည်ပြုတဲ့အတွက် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှုအခြေအနေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်က မှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ကြယ်ပွင့်ပြထားသောမေးခွန်းများကို တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်းနှင့် တိုင်းဒေသကြီးအဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ဖြေကြားခြင်းများ
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ မေးခွန်းမေးမြန်းခြင်း၊ ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်သို့ တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက မေးမြန်းထားသည့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းများအား တိုင်းဒေသကြီး အဆင့်အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။
ရန်ကုန်မြို့အတွင်းရှိ ဆေးကုသသောဆေးခန်းများ၊ အထူးကုဆေးခန်းများ၊ မျက်စိခွဲစိတ် ကုသနေသော ဆေးခန်းများမြောက်များစွာမှာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ လိုင်စင်လျှောက် ထားရာတွင် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ကြန့်ကြာနေပါသနည်း၊ ဆေးကုသခွင့်၊ ခွဲစိတ်ခွင့်၊ ဆေးရုံဖွင့်ခွင့်လိုင်စင်များမကျသေးဘဲ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားပါ သနည်း၊ နိုင်ငံခြားသား တရုတ်ဆေးခန်းများအား တရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပါသလား၊ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အရေးယူမှုမရှိသေးပါသနည်း၊ ဆေးကုသခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင် မရှိသေးပဲ ဆေးကုသမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့် ကိစ္စများအတွက် မည်ကဲ့သို့ အရေးယူဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်စန္ဒာမင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မအနေဖြင့် ယနေ့မေးမြန်းမှာကတော့ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆေးကုသခွင့်လုပ်ငန်း လိုင်စင် များ လက်ဝယ်ကျရောက်ခြင်းမရှိသေးဘဲ အထူးကုဆေးခန်းများ၊ ခွဲစိတ်ကုသသောဆေးခန်းများ၊ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်လူမျိုးများဖွင့်လှစ်နေတဲ့ဆေးခန်းများ များစွာတွေ့ရှိနေရပါသဖြင့် ၄င်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်း၊ ဆေးရုံများ ဖွင့်လှစ်ရန် ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ အဆင့်အလိုက်မှန်ကန်စွာလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေလျှောက်ထားကြ သော်လည်း အချိန်ကြာမြင့်စွာစောင့်ဆိုင်းနေရကြောင်း၊ တစ်ချို့အဆင့်များမှာ ငွေပေးသွင်းပြီးသော် လည်း စာရေးအဆင့်တစ်ခုတည်းမှာပဲ (၇)လခန့်ကြာမြင့်တတ်ကြောင်း၊ သွားရောက်မေးမြန်းလျှင် လည်းနေပြည်တော်သို့ ပို့ထားကြောင်းစသည်ဖြင့် အကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနှင့် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကျခွင့် ဟာ ကြာမြင့်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့လည်း တစ်ချို့သောရွှေဘုံသာလမ်းမှာရှိနေတဲ့ ပုဂ္ဂလိက အထူးကုဆေးခန်းများမှာ လိုင်စင်လျှောက်ထားဆဲ အခြေအနေများတွင်ပင် ဆေးကုသခြင်း၊ ခွဲစိတ် ကုသခြင်းလုပ်ငန်းတွေကို လုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ ဆေးကုသခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေ ရရှိပြီး ဆေးခန်းများမှာ နောင်နှစ်အတွက် လုပ်ငန်းလိုင်စင်ပြန်လျှောက်နေစဉ်ကာလအတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေခြင်းဟာ ပြဿနာမရှိနိုင်သော်လည်း လုပ်ငန်းလိုင်စင်အသစ် စလျှောက်ရတဲ့ဆေးခန်းတွေ၊ ခွဲစိတ်ကုသခန်းတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်မကျသေးခင် ခွဲစိတ်ကုသ နေခြင်းဟာ သင့်လျော်မှုမရှိပါဘူး။ ဒါကြောင့်လည်း ကျွန်မမေးမြန်းလိုတဲ့မေးခွန်းကတော့ ရန်ကုန်မြို့ အတွင်းမှာရှိတဲ့ ဆေးကုသသောဆေးခန်းများ၊ အထူးကုဆေးခန်းများ၊ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသနေသော ဆေးခန်းမြောက်များစွာမှာ ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနသို့ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် မည်သည့် အတွက်ကြောင့် ကြန့်ကြာနေရပါသလဲ။ ဆေးကုသခွင့်၊ ခွဲစိတ်ခွင့်၊ ဆေးရုံဖွင့်ခွင့်လိုင်စင်များ မကျသေးဘဲ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးထားရပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်း (၂)ချက် ကိုမေးမြန်းလိုပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်လူမျိုးများ ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ဆေးခန်း များဟာ လသာမြို့နယ်၊ ဗိုလ်တထောင်မြို့နယ်တွေမှာ ကြော်ငြာအားကောင်းကောင်းနဲ့ တိုင်းလင့်၊ ရောင်ခြည်သစ်၊ အာရှစသည်ဖြင့် နာမည်များနှင့်ဖွင့်လှစ်နေတဲ့ ဆေးခန်းတွေလည်း (၅)ခုလောက် ရှိပါတယ်။ ရာစုသစ်နှင့်ပိုမိုဆေးခန်းတွေကို အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း တိုင်းလစ်ဆိုတဲ့ အမည်နှင့် တဖန်ပြန်ပေါ်လာပါတယ်။ သို့ပါသောကြောင့် ကျွန်မမေးမြန်းလိုတဲ့ မေးခွန်း(၂)ခုကတော့ နိုင်ငံခြားသားတရုတ်ဆေးခန်းတွေကို တရားဝင်ဖွင့်ခွင့်ပေးထားပါသလား၊ မည်သည့်အတွက်ကြောင့် အရေးယူမှု မရှိသေးပါသလဲ။ ဆေးကုသခွင့်လုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိသေးပဲ ဆေးကုသမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်သော အသက်ဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေမည့်ကိစ္စများအတွက် မည်ကဲ့သို့အရေးယူ ဆောင်ရွက်နေပြီလဲဆိုသော မေးခွန်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးနိုင်ငံလင်း၊ လူမှုရေးရာဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်တဲ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ဆေးကုသသောဆေးခန်းများ၊ အထူးကုဆေးခန်းများ၊ မျက်စိခွဲစိတ်ကုသနေသော ဆေးခန်းများအနေဖြင့် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေး လိုင်စင်လျှောက်ထားရာတွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆောင်ရွက်သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရှေးဦးစွာ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအမျိုးအစားအလိုက် လျှောက်လွှာများဖြည့်၍ သတ်မှတ်လိုင်စင်ကြေးများ မြန်မာ့စီးပွားရေးဘဏ်တွင် ပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ပြီးလျှင် မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာနတွင် လျှောက်လွှာတင်သွင်းရပါမည်ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့နယ်မှ မြို့နယ်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေး ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ၊ ခရိုင်ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပုဂ္ဂလိက ကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီတို့မှ အဆင့်ဆင့်ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးရပါတယ်။ တိုင်းဒေသကြီးမှ တစ်ဆင့် ဗဟိုပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မတီမှလိုအပ်သလို ဗဟိုအဆင့်အဖွဲ့အလိုက် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးပြီး လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပြုသင့်မှ ခွင့်ပြုလိုင်စင်ထုတ်ပေးရမှာဖြစ်သဖြင့် အချိန် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ကြာမြင့်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးကုသခွင့်၊ ခွဲစိတ်ခွင့်၊ ဆေးရုံဖွင့်ခွင့်များ လိုင်စင်မကျသေးဘဲ လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးမထားပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်း လိုင်စင် လျှောက်ထားသူများသည် နိုင်ငံသားမှတ်ပုံတင်ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံသားများသာလျှောက်ထား ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသားပိုင်ဆေးခန်းများ လုပ်ငန်းလိုင်စင်လျှောက်ထား၍ လုံးဝမရပါ။ လုပ်ကိုင်ခွင့်လည်းပေးထားမှုမရှိပါဘူး။ ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာဥပဒေအခန်း ၁၅၊ အပိုဒ်ခွဲ ၃၁ မည်သူမဆို ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းလုပ်ငန်းကို လိုင်စင်မရှိကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူအား အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်မှ အများဆုံးထောင်ဒဏ် (၅)နှစ်အထိ ချမှတ် သည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်သည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၃၂ မည်သူမဆို ပုဂ္ဂလိကသွားဖွားလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းလုပ်ငန်းကို လိုင်စင်မရှိကြောင်းလုပ်ကိုင်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်း ခံရလျှင် ထိုသူဟာ အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ် (၆)လမှ အများဆုံးထောင်ဒဏ် (၃)နှစ်အထိ ချမှှတ် သည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်းချမှတ်နိုင်ပါသည်။ အပိုဒ်ခွဲ ၃၃ မည်သူမဆို ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံလုပ်ငန်း (သို့မဟုတ်) ပုဂ္ဂလိကသားဖွားလုပ်ငန်းနှင့် ပုဂ္ဂလိကဆေးခန်းလုပ်ငန်းတို့မှ အခြားပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းတစ်ခုခုတစ်ရပ်ရပ်ကို လိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ကိုင်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရလျှင် ထိုသူဟာ အနည်းဆုံးထောင်ဒဏ်(၃)လမှ အများဆုံးထောင်ဒဏ် (၁)နှစ်အထိချမှှတ်သည့်အပြင် ငွေဒဏ်လည်း ချမှတ်နိုင်ပါသည်ဟုပါရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးလုပ်ငန်းလိုင်စင်မရှိဘဲလုပ်ဆောင် နေသော ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းများအားမြို့နယ်၊ ခရိုင်၊ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေး လုပ်ငန်းကြီးကြပ်မှုကော်မတီမှ အဆင့်ဆင့်စိစစ်၍ အရေးယူပြီးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လေးစားစွာဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ဆက်လက်ဖြေကြားလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းဒေသကြီး ပုဂ္ဂလိကကျန်းမာရေးကြီးကြပ်ကော်မတီအနေနှင့် ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်ကြီးတွေ တိုင်ကြားတဲ့အတိုင်း အရေးယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင်လည်း တိုင်းဒေသကြီးအဖွဲ့အနေနှင့်ကွင်းဆင်းပြီးတော့ စိစစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ ဒီ့အပြင် ကျွန်တော်တို့ လုံလောက်မှုမရှိတာသိရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဆေးခန်းတွေဟာ နာမည်ပြောင်းတွေနဲ့လုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်။ အဲတော့ ကျွန်တော်တို့လိုအပ်လျက်ရှိတာကတော့ ပြည်သူလူထုနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေအားလုံး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လုပ်မှသာ ကျွန်တော်တို့ နိုင်နိုင်နင်းနင်းဖြစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံအား မြို့နယ်ဆေးရုံအင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ပြုပြင်တည်ဆောက် ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ဆေးဝါးကုသရေးတို့အတွက် လိုအပ်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များ ခန့်အပ်ချထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက် ပေးမည်နှင့် အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဆန်းဝင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးအောင်ဆန်းဝင်း၊ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ မှော်ဘီမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်ဆန်းဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့အစည်းအဝေးမှာ ကျွန်တော်တို့မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံရဲ့လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် မေးခွန်းများမေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့မှော်ဘီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံဟာ ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံဟာ တိုက်နယ်ဆေးရုံအဆင့်လောက်တောင်မရှိအောင် ကိုပင် အင်မတန်မှပျက်စီးယိုယွင်းမှုရှိပါတယ်။ ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့ဆေးရုံဆိုပေမယ့် ကုတင်(၅ဝ)ထားလို့ ရအောင်လည်း အခန်းတွေမရှိပါဘူး။ ဒီ့ပြင်ကျွန်တော်တို့ ဆေးရုံမှာလူနာတွေကိုစမ်းသပ်ဖို့အတွက် ဓါတ်မှန်ခန်းကလွဲ၍ တခြားဘာမှမရှိဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဓါတ်မှန်ခန်းသာရှိတယ် ဓါတ်မှန်ကိုကျွမ်းကျင်အောင်ရိုက်နိုင်တဲ့ ဆရာဝန်မရှိပါဘူး။ ဓါတ်ခွဲခန်းနှင့် ဓါတ်မှန်ခန်းအခန်းတွေဟာ လက်ရှိအခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် အုတ်အချပ်တွေဟာပြုတ်ကျတော့မည့်အတိုင်း ပျက်စီးနေပါတယ်။ နောက်တစ်ချက် ကျွန်တော်တို့ မိလ္လာခန်းတွေဟာ အင်မတန်ကိုပျက်စီးယိုယွင်းနေပါတယ်။ ရေကလည်း ရေကောင်းကောင်းသန့်သန့်မရဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်သူ့ ဆေးရုံကိုရောက်ရှိလာတဲ့ ထိခိုက်ဒဏ်ရာဝေဒနာရှင်တွေဟာ ဘယ်လိုအကြောင်းကြောင့် ရောက် ရောက် အခြားဆေးရုံတွေကိုလွဲပြောင်းရတဲ့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်။ နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်များဆိုလို့ရှိရင် အင်းစိန်၊ မြောက်ဥက္ကလာပတို့ကိုလွှဲရင်းနဲ့ပဲ လမ်းမှာတောင် မွေးဖွားရတဲ့အဆင့်တွေတောင်ရှိနေပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် အောက်ပါ မေးခွန်းများကို မေးမြန်းအပ်ပါတယ်။ (၁) မှော်ဘီမြို့နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံအား မြို့နယ်ဆေးရုံ အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ ပြုပြင်တည်ဆောက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ (၂) ရောဂါရှာဖွေရေးနှင့် ဆေးဝါးကုသရေးတို့အတွက် လိုအပ်သော အထောက်အကူပစ္စည်းများ တပ်ဆင်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ (၃) ကျွမ်းကျင်ဆရာဝန်များ ခန့်အပ်ချထားပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်နှင့် အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်က ဖြေကြားပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးနိုင်ငံလင်း၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ်ဆေးရုံ ကတော့ကျွန်တော်တို့ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့ဆေးရုံဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် နိုင်ငံတော်မှပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်း ငွေခွေဲ0xm;rှုမှာ ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့ဆေးရုံတွေအတွက် မပါရှိပါဘူး။ ယခုနှစ်အတွင်းမှာတော့ ကုတင်(၁ဝဝ)ဆေးရုံများအတွက်သာ ဘတ်ဂျက်ငွေမှာပါရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်မှာတော့ မြို့နယ်ဆေးရုံအားလုံး ပြင်ဆင်ထိန်းသိမ်းရေးအတွက် နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ခွဲဝေချထားမှု စီစဉ်ထား တာရှိပါတယ်။ ကုတင်(၅ဝ)ဆံ့တွေအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ မှော်ဘီဆေးရုံဝန်ထမ်းများ အင်အားမှာ ဓါတ်မှန်ဆရာဝန်ပါရှိခြင်းမရှိပါဘူး။ မှော်ဘီဆေးရုံဖွဲ့စည်းမှုတွင်လိုအပ်သော ဆရာဝန်များ၊ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များကို အချိန်မီဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့တော့ ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ အသည်းရောင်အသားဝါ ဃ ပိုးဖြစ်ပွားနေသူများအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ မည်သို့စီစဉ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်၊ အစီအစဉ်မရှိပါက အဘယ့်ကြောင့်မရှိသည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးတင်ဝင်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် တကွ ြွကရောက်လာသော လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးကျန်းမာချမ်းသာပါ စေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁) မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ဝင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ဒီနေ့ မေးမြန်းချင်တဲ့ကိစ္စက ကျန်းမာရေးနှင့်ပတ်သက် တဲ့ကိစ္စဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါြပိုးဃ ပိုးပေါ့။ အဓိက ဃ ပိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ တင်ပြဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာြပိုးဃ ပိုးနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ တော်တော်များများဖြစ်တယ်လို့ ကြားသိနေရပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အခု ဒီမေးခွန်းကိုမေးရတာလည်း တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြီးတဲ့အခါမှာ ပြည်သူနှင့်ဆင်းတွေ့တဲ့အခါ အသည်းရောင်အသားဝါ ဃ ပိုးဖြစ်ပြီးတော့ ဆေးကုသမှုခက်ခဲတဲ့အတွက် ကွယ်လွန်သွားတဲ့ကိစ္စတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒါတွေကို နောက်ထပ် ဘယ်လိုလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားမလဲဆိုတာ တင်ပြပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒီမေးခွန်းကိုလွှတ်တော်မှာမေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းအရောင်အသားဝါြပိုး ဃ ပိုးကတွဲလျက်ရှိပါတယ်။ြပိုးကတော့ ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ဆေးထိုးတဲ့အတွက် ဒါကို ကာကွယ်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးတစ်ပိုင်းရှိပါတယ်။ ဒုတိယအချက်ကတော့ြပိုး ဃ ပိုးနှင့်ပတ်သက် ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေမှာ ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအင်မတန်နည်းပါတယ်။ နည်းတဲ့အခါကျ တော့ ရောဂါတွေဟာဖြစ်မှသိရတဲ့ အခြေအနေလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဃ ပိုးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ
ဃ ပိုးက ကူးစက်မှုဆိုတာကလည်း ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ချွေးကအစ ကူးနိုင်တဲ့အခါကျတော့ ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှအခုအချိန်ထိ ဘတ်စ်ကားပေါ်မှာကြပ်သိပ်မှုတွေ ဒီအခါမှာချွေးထွက်မှုတွေက တစ်ဆင့် ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှုတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူတွေကပေါ့ပေါ့ တန်တန်နေကြပါတယ်။ ဒီလိုကူးစက်မှုတွေက ရှိလာတဲ့အနေအထားလေးတွေ တွေ့ရပါတယ်။ ဃ ပိုး ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ် အသည်းအခြောက်မယ်။ အသည်းခြောက်တာကနေ အသည်းကင်ဆာဖြစ်မယ်။ ဆုံးရှုံးမယ်။ ကုသမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ယခင်က ကုသနိုင်ခြင်းတော်တော် ခဲယဉ်းပါတယ်။ ဆေးကုသမှုကုန်ကျစရိတ်အတော်များခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့(၁ဝ)ရက် လောက်က ကျွန်တော်တို့အရင် အသည်းကျန်းမာရေးဆရာဝန်ကြီး ဦးခင်မောင်ဝင်းကတော့ြပိုး ဃပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကုသမှုတွေဆေးတွေပေါ်နေပါပြီ။ ကုသလို့ရပြီလို့ပြောပါတယ်။ အဲဒီတော့ကျွန်တော် သိချင်တာကတော့ြပိုး ဃ ပိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရန်ကုန်တိုင်းအစိုးရအဖွဲ့ကမည်သို့ဆောင်ရွက်ပေးတယ် ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ဃ ပိုးကိုအဓိကထားပြီးသိချင်တာပါ။ အဲဒီလိုမေးတဲ့အခါမှာ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးကိစ္စတွေ ကျန်းမာရေးဃ ပိုးရှိတဲ့ရောဂါသည်တစ်ယောက်ကို အစိုးရဆေးရုံတွေ မှာဖြစ်စေ၊ အစိုးရရဲ့အစီအစဉ်နှင့်ဘယ်လိုကုသပေးမယ်ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် မို့လို့ ကျွန်တော်မေးချင်တဲ့မေးခွန်းကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးနိုင်ငံလင်း၊ လူမှုရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်တဲ့ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ အသည်းရောင်အသားဝါရောဂါပိုးများတွင် အဓိက ဗယ ယြ ဃ ဟု (၃)မျိုးရှိပါသည်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဗပိုးမှာ ခုခံအားကောင်းလျှင် အလိုအလျောက် ပျောက်ကင်းနိုင်ပါတယ်။ ကာကွယ်ဆေးမလိုအပ်ပါဘူး။ ကာကွယ်ဆေးများပေါ်ပေါက်လာပြီ ဖြစ်သလို ကုသဆေးများလည်းရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဃပိုးမှာ ကာကွယ်ဆေး မပေါ်ပေါက်သေးပါဘူး။ အသည်းရောင်အသားဝါ ဃပိုးကူးစက်နိုင်သော နည်းလမ်းများမှာ အသိ ပေးခြင်းဖြင့် လူထုအတွင်းကာကွယ်ရေးအသိစိတ်များ တိုးပွားအောင်ပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဝေဘာဂီအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ မင်္ဂလာဒုံအထူးကုဆေးရုံကြီး၊ သာကေတ အထူးကုဆေးရုံကြီး၊ ကုတင်၅ဝဝဆံ့ အထူးကုဆေးရုံကြီး(၄)ခုတို့တွင် ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဃံဗှု(ဃူငညအသည ံနေူအ့ ဗျျသခငအေငသည ှုညငခငအေန) အဖွဲ့တို့ပူးပေါင်း၍ ၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်း လူပေါင်း(၂ဝဝဝ)ကျော်အား အခမဲ့ဆေးကုသပေးရန် စီစဉ် ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၈ခုနှစ်တွင်လည်း ထပ်မံတိုးချဲ့ကုသပေးရန် စီစဉ်ထားရှိပါကြောင်း လေးစား စွာဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရေတာရှည်ရပ်ကွက်၊ (၅)ထပ်ကြီးအနောက်ရပ်ကွက်၊ ကိုယ့်မင်း ကိုယ့်ချင်း ရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရား လမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတားကြီးအနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပြည်သူများ၊ ယာဉ်မောင်း အများစုအတွက် တံတားကြီး၏အောက်တွင် ကားပါကင်နှင့် အလှပန်းခြံ၊ အနားယူအပန်းဖြေ နေရာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းထွဋ်မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသောင်းထွဋ်၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများနှင့် ဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များ ကျွန်တော် ပထမ ဦးစွာ နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော် လူမှုရေးနှင့်စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင် ဦးသောင်းထွဋ် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မေးမြန်းလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ငါးထပ်ကြီးအနောက် ရပ်ကွက်၊ ကိုယ့်မင်းကိုယ်ချင်းရပ်ကွက်၊ ရွှေတောင်ကြား(၂)ရပ်ကွက်၊ အနောက်ရွှေဂုံတိုင်ရပ်ကွက်၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်း၊ ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတားကြီအနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ပြည်သူများယာဉ်မောင်း အများစုအတွက် တံတားကြီးအောက်တွင် ကားပါကင်နှင့်အလှပန်းခြံ၊ အနားယူအပန်းဖြေနေရာများ ဆောက်လုပ်ပေးရန်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ။ ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်။ မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် မဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင် ခုံးကျော်တံတားကြီးများ များစွာဆောက်လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ထိုသို့ ဆောက်လုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ တံတားအောက်မှာ ကားပါကင်နှင့်အလှပန်းခြံနေရာများ ဆောက်လုပ်ထားသည်ကိုများသောအားဖြင့် တွေ့ရှိရပါတယ်။ ကျွန်တော့်မဲဆန္ဒနယ်ဖြစ်တဲ့ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေဂုံတိုင်တံတားကြီး ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် အခြားခုံးကျော်တံတားများနည်းတူ အလှပန်းခြံ၊ အပန်းဖြေအနားယူရန်နေရာများ မပါလာသည်ကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတားကြီးသည် အရှေ့ဘက်ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားနှင့် ဇီဝိတဒါန ဆေးရုံမှစ၍ အနောက်ဘက် နထခနူ ွှသတနမယ နထခနူ ံသအနူ အကျော် နှင်းဆီကုန်းဘိုးဘွားရိပ်သာ အနီးအနားထိဖြစ်ပါတယ်။ ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော်တံတား၏အနီးမှာ ရပ်ကွက်ပေါင်း(၅) ရပ်ကွက် ရှိပြီး လူနေထူထပ်ပြီးနေ့ညစည်ကားလျက်ရှိပါတယ်။ အလုပ်သမားများ၊ ကျောင်းသားများ၊ ရဟန်းရှင် ပြည်သူများ လှုပ်ရှားသွားလာသောနေရာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ တံတားကြီးရဲ့အောက်မှာ သံဇကာများ ကာရံထားပြီး သွားလာရာတွင်လည်း ပြည်သူများအခက်အခဲရှိပါတယ်။ တံတားကြီးရဲ့အောက်မှာလည်း မီးပွိုင့်ရှိပြီးအရှေ့ဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုလျှင် ဗဟန်းမြို့နယ် တရားရုံး၊ ဇီဝိတဒါနဆေးရုံ၊ ကန်တော်ကြီးမှ တဆင့် မြို့ထဲသို့သွားလာနိုင်ပါတယ်။ အနောက်ဘက်သို့သွားမယ်ဆိုလျှင် နထခနူ ွှသတနမယ နထခနူ ံသအနူ၊ စင်္ကာပူသံရုံး၊ ဓမ္မစေတီလမ်းသွယ်ရှိပါတယ်။ အနောက်ဘက်သို့ဆက်သွားလျှင်လည်း ဘိုးဘွားရိပ်သာ၊ ဟာမစ်တစ်၊ မဟာစေတီ၊ ပုလဲကွန်ဒို၊ ကုက္ကိုင်းတို့မှတစ်ဆင့် မြောက်ဥက္ကလာပသို့သွားနိုင်ပါတယ်။ မီးပွိုင့်ရဲ့တောင်ဘက်သို့သွားမယ်ဆိုလျှင်လည်း ရွှေဂုံတိုင်ပလာဇာ၊ ယုဇနဟိုတယ်၊ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရုံး၊ လင့်လမ်း ထိုမှတစ်ဆင့် မြေနီကုန်း၊ စမ်းချောင်းသို့သွားလာနိုင်ပါတယ်။ မီးပွိုင့် မြောက်ဘက်မှာဆိုရင် ကမ္ဘောဇဘဏ်၊ တော်ဝင်နှင်းဆီစားသောက်ဆိုင်၊ ဘဏ်ရိပ်သာ၊ ငါးထပ်ကြီး၊ ခြောက်ထပ်ကြီး၊ တာမွေတို့ကိုသွားလာနိုင်ပါတယ်။ ထိုသို့ပြောပြရခြင်းမှာ ရွှေဂုံတိုင်ခုံးကျော် တံတားကြီးရဲ့အောက်တွင် ကားပါကင်နှင့်အလှပန်းခြံ၊ အပန်းဖြေနေရာများဆောက်လုပ်ပေးသင့် ပါကြောင်း ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းအပ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ အားလုံးပဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဗဟန်းမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသောင်းထွဋ်ရဲ့မေးခွန်းကို ကျွန်တော်ဖြေပါ့မယ်။ ဒီတံတားကြီးရဲ့အောက်မှာ ကားပါကင်၊ အလှပန်းခြံ၊ အနားယူအပန်းဖြေနေရာများ ဆောက်လုပ်ဖို့ လောလောဆယ်ဆယ်အစီအစဉ်ရှိ/မရှိမှာ ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်အရတော့ လောလောဆယ် အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ များသောအားဖြင့် တံတားများသည်ကန်ထရိုက်ပေးထားသော တံတားများ ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့လိုက်စစ်တဲ့အခါ တံတားရဲ့ဥပဓိရုပ်ကို ပီပီပြင်ပြင်ဖြစ်အောင် မနည်းလိုက်ပြီးတော့ ဖြည့်တင်းပေးနေရပါတယ်။ တစ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင် တံတားဖွင့်ပွဲသာလုပ်သွားတယ်။ တစ်ခြမ်းမှာ ကတ္တရာမခင်းထားတဲ့အတွက် လိုက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ဟာ ဒီအထိတော့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူး။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီဘတ်ဂျက်ကို ထည့်သွင်းလို့ မရတဲ့အခြေအနေဖြစ်တဲ့အတွက် လောလောဆယ်အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ သို့သော် လည်း တခြားအစီအစဉ်တွေနဲ့တော့လုပ်နေပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဒီခုံးကျော်တံတားအောက် တွေမှာ တစ်ချို့နေရာအကွက်အကွင်းကျတဲ့အခါမှာ ဒီကုမ္ပဏီကြီးတွေရဲ့ ဃျွှ ဏမသါမော အရ သူတို့ကမ်းလှမ်းလာတာရှိပါတယ်။ ကမ်းလှမ်းလာတာရှိတဲ့အခါကျရင် သူတို့ကမ်းလှမ်းချက်ပေါ် မူတည်ပြီး သူတို့ရဲ့ ှစသညျသမျ့ငစ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဒါကို ဖန်တီးပေးနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခု က ဒီမှာလည်း ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာ ကားပါကင်၊ အလှပြပန်းခြံ ွမေိနညငညါ၊ အနားယူ အပန်းဖြေနေရာများ ျွနခမနအေငသည ဃနညအနမ (၃)ခုရှိပါတယ်။ အဲဒီ(၃)ခုတွေကတော့ ကားပါကင် ခုံးကျော်တံတားအောက်မှာမရှိပေမယ့် တခြားနေရာတွေမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ဘတ်ဂျက်ထည့်သွင်း ဆွဲပါတယ်။ အထူးသဖြင့်တော့ ဒီခုံးကျော်တံတားအောက်မှာတော့ ှစသညျသမျ့ငစ နှင့်သွားပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ ှစသညျသမ ပေးနိုင်တဲ့ ကုမ္ပဏီတွေကလည်းရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော်တို့က ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ ဃျွှ ဏမသါမော အရ ဗိလနမအငျငညါနဲ့ သူတို့ပေးချင်တဲ့ ှစသညျသမ နှစ်ခုကိုပြန်ချိန်ရတာရှိပါတယ်။ ကြေညာတာများများ လူထုအကျိုးပြုတာနည်းနည်းနဲ့ နေရာပါသွားမှာလည်းစိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်လုပ်ပေးရပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ လူထုအကျိုးအမြတ်ကိုချိန်ပြီးလုပ်ရတဲ့အတွက်ပါ။ ဒီခုံးကျော်တံတားအောက်တွေ အကုန်လုံး ဟာလည်း ှစသညျသမ အရရော ဃျွှ ဏမသါမောအရရော နောက်နှစ်တွေမှာဘတ်ဂျက်အရပါ ထပ်ဆွဲထားတဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဆိုတာကို လေးစားစွာဖြေကြားအပ်ပါတယ်။
ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ အင်းစိန်လမ်း၊ ပြည်လမ်း၊ လှည်းတန်းလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီး တို့နှင့်ထိစပ်လျက်ရှိသော ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ဝင်/ထွက် ပြုလုပ်ရာတွင် အဆင်ပြေစေရန် လမ်းလယ် ရှိဘလောက်တုံးများအား ဖယ်ရှားပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးမည်၊ မရှိပါကအဘယ်ကြောင့်မရှိသည်ကို သိရှိလို ပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးတင်ဝင်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် တကွ အားလုံးမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ အမှတ်(၁)မဲဆန္ဒနယ်မှ ဦးတင်ဝင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မေးမြန်းချင်တဲ့ကိစ္စကတော့ ကျွန်တော်တို့ အင်းစိန်လမ်းမ လှည်းတန်းထိပ်က နေပြီးတော့ အင်းစိန်လမ်းမရွာမကွေ့အထိ ဘလောက်တုံးတွေပိတ်ထားတဲ့ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီးတော့ ပြည်သူရဲ့တင်ပြချက်အရ ကျွန်တော်မေးမြန်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မေးမြန်းထားတဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီးတော့ လှည်းတန်းမှအင်းစိန်ဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ ပြောသွားတယ်ဆိုတာကို မှတ်ယူ ပေးပါ။ ကျွန်တော်တို့ ကမာရွတ်-လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ကနေပြီးတော့ ဂမုန်းပွင့်ကျော်တဲ့အထိ အဲဒီမှာ ဘလောက်တုံးအသေတွေလည်းရှိတယ်။ အရှင်တွေလည်းရှိတယ်။ ယခင်တုန်းက လှည်းတန်းကနေ အင်းစိန်လမ်းကိုသွားတဲ့ညာဘက်အခြမ်းမှာ (၂)ရပ်ကွက်ရှိပါတယ်။ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာ (၁)ရပ်ကွက် ရှိပါတယ်။ (၁)ရပ်ကွက်မှာ စံရိပ်ငြိမ်(၁)လမ်း၊ (၂)လမ်း၊ (၃)လမ်းဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ (၃)လမ်း ထိပ်ကနေပြီးတော့မှ အရင်တုန်းက ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်ပေးထားပါတယ်။ လမ်းကိုဖြတ်ပြီးတော့ မြို့ထဲဘက်ကိုသွားတဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေအောင်ပါ။ နောက်ပိုင်းမှာ မော်တော်ယာဉ် ကြပ်တည်းမှု တွေ၏ အသွားအလာအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန် ဒီလမ်းတွေအားလုံးကိုပိတ်လိုက်တဲ့အခါ ညာဘက်ခြမ်းမှာရှိတဲ့ (၂)ရပ်ကွက်က မော်တော်ယာဉ်တွေက မြို့ထဲဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင် အင်းစိန် ဘက်ကိုပြန်သွားပြီး ဂမုန်းပွင့်ကျော်တဲ့အခါမှ ပြန်ကွေ့ရတာတွေရှိပါတယ်။ အဲဒီအတွက် အရေးပေါ်ကိစ္စတွေ သွားရတဲ့အခါပဲဖြစ်စေ၊ အလုပ်ကိစ္စနှင့်အရေးကြီးသွားတဲ့အခါဖြစ်စေ နှောင့်နှေး ကြန့်ကြာမှုတွေ အများကြီးဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဒီလိုပါပဲ ဘယ်ဘက်အခြမ်းမှာရှိတဲ့ (၁)ရပ်ကွက်က အင်းစိန်ဘက်ကို သွားချင်တဲ့အခါဆိုရင်လည်း သွားလို့မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားရ သလဲဆိုရင် လှည်းတန်းမီးပွိုင့်ကိုသွားရမယ်။ ပြည်လမ်းဘက်ကို ချိုးရတယ်။ ပြည်လမ်းကနေတစ်ဆင့် မှ ပါရမီလမ်းကနေ ပြန်ကွေ့သွားရတဲ့အပိုင်းတွေဖြစ်လာတဲ့အခါ သွားရေးလာရေးနှောင့်နှေးမှုတွေဖြစ် ပါတယ်။ ဒီဘလောက်တုံးတွေချတဲ့ကိစ္စက ွှမေ််ငခ ောဲ ပေါ့ ယာဉ်ကြောကြပ်တည်းမှုကို ဖြေရှင်းတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပေမယ့်လို့ လမ်းဘေးဝဲယာမှာရှိတဲ့ ရပ်ကွက်တွေရဲ့သွားလာမှုကိုလည်း တစ်ချို့ထိခိုက်နေတာရှိတဲ့အတွက်လည်း ဒီကိစ္စကိုတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ အမှတ်(၁) ရပ်ကွက်ဘက်ကနေပြီးတော့ အင်းစိန်ဘက်ကိုပြန်သွားချင်တဲ့သူတွေက ဒီအင်းစိန်လမ်းမရဲ့ထိပ် မီးပွိုင့်မှာ (့) ွှကမည ဂငယ်ကွေ့ပြန်ကွေ့လို့မရပါဘူး။ ကျန်တဲ့လမ်း(၃)လမ်းမှာတော့ (့) ွှကမည တန်းပေးထားပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း နှောင့်နှေးကြန့်ကြာစေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဖြစ်စေ ပါတယ်။ ဒီလမ်းတွေ အားလုံးကိုလာရတဲ့အခါမှာ ဘုရင့်နောင်လမ်းကလည်းလာတယ်။ လှည်းတန်း လမ်းကလည်းလာတယ်။ မိမိတို့သွားလိုတဲ့ခရီးကို ဒီဘလောက်တုံးတွေပိတ်ထားတဲ့အတွက် သွားရတာ အခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ကျွန်တော်မေးမြန်းချင်တာ ကတော့ ကျွန်တော်တို့ ယခင်တုန်းက စံရိပ်ငြိမ်(၃)လမ်းထိပ်မှာရှိတဲ့ ယာယီဘလောက်တုံးတွေ ရှိတဲ့နေရာမှာ ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်ဖို့။ သို့မဟုတ် အဆင်ပြေတဲ့တစ်နေရာမှာ ဝဲယာနှစ်ဘက်တွင် အဆင်ပြေစွာ ဒီလမ်းကိုသွားလာနိုင်ဖို့အတွက် ဘလောက်တုံးအချို့ကိုဖယ်ရှာပေးဖို့ အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ ဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ဒီလို အစီအစဉ်လုပ်ပေးမယ်ဆိုလျှင်တော့ သွားလာရေးလွယ်ကူသွားမယ်။ နောက်တစ်ခုက (ဂ)ကွေ့ ကွေ့နိုင်ဖို့ (့) ွှကမည တစ်ခုခွင့်ပြုဖို့ကိစ္စကို ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် တာဝန်ရှိ ပုဂ္ဂိုလ်များကို တင်ပြပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးမောင်မောင်စိုး၊ စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါတဲ့ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးများနှင့်ဧည့်တော်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကမာရွတ်မြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်ဝင်းမေးတဲ့မေးခွန်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါ တယ်။ ကျွန်တော်စေတနာထားပြီးတော့ ပြန်လည်ဖြေပါ့မယ်။ ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ အင်းစိန်လမ်း၊ ပြည်လမ်း၊ လှည်းတန်း၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမကြီးတို့နှင့်ထိစပ်နေတဲ့ ရပ်ကွက်အတွင်းသို့ ဝင်ထွက်ပြုလုပ်တဲ့အခါမှာ အဆင်ပြေစေဖို့လမ်းလယ်ရှိဘလောက်တုံးများ ဖယ်ရှားပေးရန် လောလောဆယ်အားဖြင့်တော့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့မှာ အကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ တုံးအနေနဲ့ကြည့်လျှင်တော့ မြို့တော်ကိုခပ်တုံးတုံးပဲမြင်ရပါလိမ့်မယ်။ ဒီတုံးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ ဘာမှပဏာမရတဲ့ဟာဆိုပြီးတော့ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်လည်း ကျွန်တော် ျွနျနမေခ့ ှနမလငခန တော်တော်များများလုပ်ပါတယ်။ တုံးမရှိတဲ့နေရာနှင့် တုံးရှိတဲ့နေရာ မှာ ကားတွေ ဗခခငိနညအ ဖြစ်တယ်။ လူတွေပွဲချင်းပြီးသေတဲ့နှုန်းတွေဟာ တုံးထားလိုက်တဲ့အတွက် ကြောင့်တော်တော်များ လျော့သွားတာရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့်တော့ ညအချိန်တွေမှာ တစ်ချို့ ကားတွေမှာ လက်လွတ်စပယ်ပြိုင်မောင်းတဲ့အခါ တုံးကိုမထားတဲ့အတွက်ကြောင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် တိုက်တာတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဲဒီတော့ နေ့ဘက်မှာကားရဲ့ ွှမေ််ငခ ောဲ ဖြစ်တာကိုလည်း အထိုက် အလျောက်ရှိနိုင်ပေမယ့်လည်း လူ့ရဲ့အသက်က တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ လူ့အသက်အန္တရာယ်မရှိအောင် ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ဒီတုံးတွေဟာ မြန်မာပြည်မှာ တွင်မဟုတ်ပါဘူး။ အင်္ဂလန်မှာလည်း လက်ရှိအခြေအနေအရရှိနေပါတယ်။ ဂျပန်မှာလည်းရှိပါတယ်။ တစ်ချို့နိုင်ငံကြီးတွေမှာလည်းရှိနေပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီတုံးတွေက ရွှေ့ရပြောင်းရတာလည်း လွယ် ပါတယ်။ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ဒီတုံးတွေထားပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ယာဉ်မောင်းစနစ်ကညာမောင်း ဖြစ်နေတယ်။ များသောအားဖြင့် ညာဘက်ကိုကွေ့သွားတဲ့ကားတိုင်းဟာ ပြဿနာမရှိပေမယ့် ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့သွားတဲ့ကားတိုင်းက ပြဿနာဖြစ်နေပါတယ်။ ဂငယ်ကွေ့ကွေ့လိုက်တဲ့အတွက် ကြောင့် ဂငယ်ကွေ့မှာဘဲ နောက်ကတုံးခံထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ဂငယ်ကွေ့နောက်မှာရှိတဲ့ ဧရိယာ တစ်ခုလုံးက ွှမေ််ငခ ောဲ ဖြစ်လာပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဂငယ်ကွေ့ မဟုတ်ဘဲနှင့်ူချိုးအတိုင်း ကိုယ်ရပ်ကွက်ကိုဘယ်ဘက်ချိုးမယ်။ သို့သော်လည်း နိုင်ငံခြားနှင့်ယှဉ်ရင် သိပ်အတ္တကြီးလွန်းပါတယ်။ ကားလည်းစီးသေးတယ်။ လိုရာခရီးကိုအနီးဆုံးနဲ့ အိမ်ကိုလည်းရောက်အုံးမယ်။ ရှိသမျှကိုလည်း အကုန်လုံးတုံးတွေဖယ်ပေးရမယ်ဆိုရင် ဒီနေရာမှာသူကွေ့လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် တစ်ချို့ဆိုလို့ရှိရင် လူကြီးမင်းတို့တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ကားကတုံးထားတာတောင် ကျူးကျော်ခေါင်းထိုးပြီးတော့ ဟိုဘက်မှာ ဧရိယာယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့် သွားတဲ့အခါ ွှမေ််ငခ ောဲ ဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ကားတွေ ညာဘက်ကနေ ဘယ်ဘက်ကိုချိုးတဲ့အတွက် ဘယ်ဘက်ကလာတဲ့ကားတွေက ဒီခေါင်းထိုးထားတဲ့ အတွက် တော်တော်များများကို ွှမေ််ငခ ောဲ ဖြစ်သွားတာရှိပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် ခုံးကျော် တံတားတွေရဲ့ကွေ့အောက်မှာ ဂငယ်ကွေ့့ွှကမည ကိုထားပါတယ်။ နိုင်ငံခြားမှာလည်း ဒီအတိုင်း ပါပဲ။ ကိုယ်ကကားစီးနေတဲ့သူဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့် လမ်းလျှောက်ရတာမဟုတ်ပါဘူး။ ကားစီးနေတဲ့ အတွက်ကြောင့် သွားသင့်တဲ့ခရီးတစ်ခုကို သွားပြီး ပြန်ကွေ့ဖို့လိုပါတယ်။ အတိုဆုံးဖြတ်လမ်းနည်းနဲ့ ပြီးစလွယ်ရောက်ဖို့ဆိုလျှင်တော့ ဒီတုံးတွေ ဖယ်ထားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါဘဲ။ သို့သော်လည်း ရန်ကုန်မြို့ဟာစနစ်မကျတဲ့ မြို့ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ အဲတော့ ကားစီးရင်တော့ကားရဲ့အထိုက် အလျောက် ဂငယ်ကွေ့လေး နေရာကပြန်ကွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် ွှမေ််ငခ ောဲတွေဟာ တော်တော်များများသက်သာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ တုံးကိုတောက်လျှောက်ပိတ်ထားပေမယ့် လူကူး မျဉ်းကြားတွေချထားပါတယ်။ အဲဒီလူကူးမျဉ်းကြားကိုတောင်မှ ကားကလုပြီး ဒီကြားထဲကကွေ့ပြီး ဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒီလောက်စည်းမရှိတဲ့ကားကို ဒီတုံးနဲ့ပဲတန်တယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးပါပဲ။ အကယ်၍များ စည်းကမ်းတကျလည်းလိုက်နာနိုင်ပါ တယ်။ အကုန်လုံးလည်း ဖြစ်လာနိုင်မယ်ဆိုရင် တုံးအစား ကျွန်တော်တို့လှပတဲ့တိုင်လေးတွေနဲ့လည်း ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီအချိန်မှာလည်း အနီးစပ်ဆုံး ကိုယ့်အိမ်ကိုယ်တော့ ရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပြန်ကွေ့ရမှာပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲတော့ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော်တို့က ညာမောင်းစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဘယ်မောင်းစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ် တုံးတွေကလိုနေပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက ဘာလည်းဆိုလို့ရှိရင် ကားမောင်းတဲ့အခါ လမ်းကျဉ်းလမ်းကျယ်ရှိပါတယ်။ သို့သော် ဘယ်ကိုမကွေ့ရဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ လမ်းဆုံလမ်းခွရှိတဲ့နေရာ မီးပွိုင့်ရှိတဲ့နေရာတွေ အဓိကမီးပွိုင့် ထားမယ်။ ွှမေ််ငခ ောဲ ရှိတဲ့နေရာ မီးပွိုင့်ရှိတဲ့နေရာမှာ ဘယ်ချိုးညာချိုးဆိုတဲ့ မီးပွိုင့်တွေထားပါတယ်။ သို့သော် တစ်ဖက်ပိတ်လမ်းတွေ၊ ွှ ပုံသဏ္ဍာန်ရှိတဲ့လမ်းတွေမှာ တုံးတွေကိုထားခြင်းအားဖြင့် လမ်းအန္တရာယ်လည်းရှင်းပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကားအနေနှင့်သွားရတာ ဆီတော့နည်းနည်း ပိုကုန်သွားပေမယ့် ခရီးသွားပြည်သူတွေ သွားရတာ ဘေးအန္တရာယ်လည်းကင်းပါတယ်။ ွှမေ််ငခ ောဲ ကိုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေကို ျွနျနမေခ့ ပြန်ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကားကြပ်မှုဟာ ဒီထက်ပိုများ လာပါလိမ့်မယ်။ ပိုများလာရုံတင်မက ကားရဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြောင့် ရန်ပါဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် ဒီတုံးထားရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍များ ယာဉ်မောင်းသူများ စနစ်တကျရှိမယ်။ ကိုယ်ချင်းလည်း စာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် တုံးအစား တုံးထက်ကောင်းတာတွေကို လွှတ်တော်မှာတင်ပြပြီးတော့ ပြန်ပြီးတော့ ပြုပြင်ပေးပါမယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
တွံတေးမြို့နယ် မြောက်ဘက်ခြမ်းဒေသ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုကဏ္ဍတွင် နွေရာသီရေချို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် မိုးရာသီရေကြီးနစ်မြုပ်မှု ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် တကလှဲ့ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျွဲလမ်းရေထိန်းတံခါးနှင့် ပန်းလှိုင်မြစ်ပြန်လည်တူးဖော်ရာတွင် ကျန်ရှိနေ သော ဆက်စပ်လုပ်ငန်း(၈)ခုအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိ ကို သိရှိလိုပါသည်၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်တွင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်၊ အစီအစဉ် မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ တွံတေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦး မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦး၊ တွံတေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ လေးစား အပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ ြွကရောက်လာသူများ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ တွံတေးမြို့နယ် မြောက်ဘက်ခြမ်း ဒေသ ရွှေမြင်းကွင်းအတွင်းရှိ ခြံစပါးစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်နေသော လယ်ဧက(၃ဝဝဝဝ)ဝန်းကျင်ခန့် ရှိပြီး ထိုလယ်မြေများအား မိုးရာသီရေကြီးနစ်မြုပ်မှုများမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်နှင့် နွေရာသီတွင်ရေချိုထိန်း သိမ်းနိုင်ရန်အတွက် ရေတံခါးများအချို့ဖြင့် လက်ရှိအချိန်တွင်တည်ဆောက်ထားတာကို တွေ့ရှိရပါ တယ်။ သို့သော် ရွှေမြင်းကွင်းအတွင်းရှိ တကလှဲ့ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲလမ်းကြောင်းတွင် ရေထိန်းတံခါး မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မိုးရာသီအခါတွင် ရေကြီးရေလျှံ၍ လယ်အချို့ရေကြီးနစ်မြုပ်ပျက်စီးပြီးတော့ နွေရာသီအခါတွင်လည်း ရေချိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် ဆောလျင်စွာ ချောင်းများတာတမံပိတ်ရသဖြင့် နွေစပါးများရေဝင်ရောက်မှုနည်းပါးကာ စပါးများအောင်မြေမရရှိဘဲ လယ်စိုက်တောင်သူများအတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ် မိုးရာသီတွင် ကျွဲလမ်းချောင်းမကြီး ရေထိန်း တံခါးမရှိသည့်အတွက် စပါးစိုက်ဧက (၂၆၇)ဧကရေကြီးနစ်မြုပ်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာတာဝန် ရှိသူများမှ (၁)ဧကလျှင် (၁ဝဝဝဝ)နှုန်း ပြန်လည်ထောက်ပံ့ကြေးပေးခဲ့တာကိုလည်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ထောက်ပံ့ကြေးပေးခြင်းဟာ အဓိကအဖြေမဟုတ်ဘဲ တောင်သူလယ်သမားများအနေဖြင့် စပါးအောင်မြင်စွာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်နိုင်ရန် ကူညီဆောင်ရွက်ချင်တာ အဓိကအဖြေဖြစ်ပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် ရွှေမြင်းကွင်းအတွင်းရှိ ကျွဲလမ်းချောင်းရေထိန်းတံခါးပြုလုပ်ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် မိုးရာသီမှာစပါးများရေကြီးနစ်မြုပ်မှုမှကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့ နွေရာသီတွင်လည်း ရေချိုထိန်းထားနိုင် ကာ စိုက်ပျိုးရေလုံလောက်စွာရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် ပန်းလှိုင်မြစ်တူးဖော်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိသော ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများဖြစ်တဲ့ ပန်းလှိုင်မြစ်ဝရေထိန်းတံခါးပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျွဲလမ်းချောင်းမကြီးရေထိန်းတံခါးပြုလုပ်ခြင်း၊ ချောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ခြင်း၊ ရေထိန်းတံခါး အသေးများပြုလုပ်ခြင်း၊ ခရမ်းဝချောင်း၊ ကင်းရွာချောင်း၊ မမျိုးစုရေထိန်းတံခါးပြုလုပ်ခြင်း၊ ပို့တရေ တံခါး ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းစသည့်ဆက်စပ်လုပ်ငန်းများ ကျန်ရှိနေတာကိုလည်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ သို့ဖြစ်ပါသောကြောင့် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းလိုတာကတော့ တွံတေးမြို့နယ် မြောက်ဘက်ခြမ်းဒေသ လယ်ယာစိုက်ပျိုးမှုကဏ္ဍတွင် နွေရာသီရေချိုထိန်းသိမ်းနိုင်ရန်နှင့် မိုးရာသီ ရေကြီးနစ်မြုပ်မှု ကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက် တကလှဲ့ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျွဲလမ်းရေထိန်းတံခါးနှင့် ပန်းလှိုင်မြစ် ပြန်လည်တူးဖော်ရာတွင် ကျန်ရှိနေသောဆက်စပ်လုပ်ငန်း(၈)ခုအား ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါတယ်။ အစီအစဉ်ရှိပါက လည်း မည်သည့်အချိန်တွင် ပြုလုပ်ပေးမည်ကိုသိရှိလိုပြီး အစီအစဉ်မရှိပါက မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးဟံထွန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာကျော်ဇင်ဦး ၏ မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျွန်တော်က ပြန်လည်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တွံတေးမြို့နယ်သည် လယ်ယာကဏ္ဍအနေဖြင့် မိုးစပါးများကောင်းစွာ စိုက်ပျိုးနိုင်သည်သာမက ယခုအခါ နွေစပါးများနှစ်စဉ်တိုးတက်စိုက်ပျိုးလာနိုင်သော ဒေသလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆည်မြောင်းနှင့် ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် တွံတေးမြို့နယ်အတွင်း ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုလျော့နည်းစေ ရန်နှင့် ရေချိုသိုလှောင်၍ နွေစပါးနှင့်ဆောင်းသီးနှံများ စိုက်ပျိုးနိုင်ရေးအတွက်လိုအပ်သော ရေနုတ် မြောင်း၊ ရေတွင်းမြောင်းတူးဖော်ခြင်း၊ ချောင်းဟောင်းများပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းနှင့် ရေထိန်းတံခါးများ ထပ်မံအသစ်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းများကို နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များရေးဆွဲ၍ ပြည်ထောင်စုနှင့်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ ရန်ပုံငွေရရှိမှုပေါ် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ တွံတေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျွဲလမ်းရေထိန်းတံခါး တည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက် ရှေးဦးလေ့လာ သုံးသပ်ခြင်း၊ ဖြစ်မြောက်နိုင်စွမ်းလေ့လာသုံးသပ်ခြင်း၊ နေရာရွေးချယ်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဘူမိဗေဒ စမ်းသပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျွဲလမ်းရေထိန်းတံခါး တည်ဆောက် နိုင်ရေးအတွက် ဆည်မြောင်းနှင့်ရေအသုံးချမှုစီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနအနေဖြင့် နှစ်စဉ်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ ရေးဆွဲထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ရေတံခါးတည်ဆောက်ရမှာ ကြုံတွေ့ရမည်ဖြစ်တဲ့ အခက်အခဲများကို ဒေသခံများရဲ့လိုလားစွာ သဘောတူညီချက်များ၊ ရေတံခါးနှင့်ရေဝင်ထွက်မြောင်း များ၊ တည်ဆောက်မည့်နေရာ မြေနေရာအသုံးချခွင့်ရရှိမည့် အသုံးပြုခွင့်ပြုရမည့် တောင်သူများရဲ့ သဘောတူညီချက်များ ကြိုတင်ရယူထားရန်လိုအပ်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြို့နယ်ရပ်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဒေသခံပြည်သူများအနေဖြင့် ဤပြဿနာများကို ဝိုင်းဝန်းကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ပန်းလှိုင်မြစ် ကြောင်း ပြန်လည်တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်၍ ဆက်စပ်သည့်လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် ပြုပြင်ရ မည့် ရေထိန်းတံခါးအဆောက်အဦ (၉)ခု၊ ရေနုတ်မြောင်း (၁၃)ခု၊ အသစ်တည်ဆောက်ပေးရမည့် ရေထိန်းတံခါး (၂)ခုနှင့် တံတားငယ် (၄)စင်းတို့အနက် ရေထိန်းတံခါး(၁)ခုသာ ဆောင်ရွက်ရန်ကျန်ရှိပြီး ကျန်လုပ်ငန်းများအားလုံး ဆောင်ရွက်ပြီးစီးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိတဲ့လုပ်ငန်းမှာ လှိုင်မြစ်နှင့် ပန်းလှိုင်မြစ်ဆုံရာတွင် တည်ဆောက်မည့်ရေထိန်းတံခါးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရေထိန်းတံခါးမှာ လုပ်ငန်းပမာဏကြီးမားတဲ့အတွက် ပြည်တွင်းပြည်ပ ပညာရှင်များနှင့်တွဲဖက်၍ နိုင်ငံတကာအဆင့် စူးစမ်းလေ့လာမှုများဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဒီဇိုင်းပုံစံများရေးဆွဲခြင်းများ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်း ပြန်လည်ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ စက်ဆန်းရပ်ကွက်၊ အထက်ပုဇွန်တောင် ကားလမ်းဘေးရှိ မြေကွက်လပ်တွင် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက စုပုံထားခဲ့သော ရာနှင့်ချီသော သစ်လုံးများမှာ ရာသီဥတုဒဏ်ကြောင့် ဆွေးမြေ့ပျက်စီးမှုများရှိနေပါသဖြင့် မည်သို့ဆက်လက် လုပ်ဆောင်မည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရန်အောင်၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ။ ။ အားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ ဦးစွာနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အခု ဆွေးနွေးမေးမြန်းမည့် မေးခွန်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အနာဂတ်မျိုးဆက်သစ်တွေအတွက် အဖိုး ထိုက်တန်လှတဲ့ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့ မြေပေါ်မြေအောက်သယံဇာတတွေဟာ ညှာတာမှုကင်းမဲ့ စွာနှင့် အမျှော်အမြင်ကင်းမဲ့စွာနှင့် ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာခဲ့ကြသူတွေကြောင့်မို့လို့ နောက်တစ်ချက်က စီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်မို့လို့ ဒါတွေကိုနောင်လာနောင်သားတွေသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် လွှတ်တော်မှာ ကျွန်တော်မေးမြန်းပြီး မှတ်တမ်းတင်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးလည်းသိပြီးဖြစ်တဲ့ အတိုင်း ဥတုရာသီတောကိုမှီဆိုတဲ့စကားလည်းရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ တောကြီးတွေဟာနိုင်ငံတော် ရဲ့ရာသီဥတုနှင့် ရေအရင်းအမြစ်တွေကိုထိန်းကျောင်းထိန်းချုပ်ပေးတဲ့ သဘာဝအရင်းအမြစ်ကြီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုတော့ နေစရာတောလည်းမရှိတော့ပါဘူး။ မရှိတော့တဲ့အတွက် မိုးခေါင်လာပြီး ရေကြီးနစ်မြုပ်မှုတွေ အပူချိန်လွန်ကဲလာတာကို အများစုဖြစ်တဲ့ပြည်သူလူထုကြီးက ခံစားနေရ ပါတယ်။ တစ်ခါက ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာ သစ်ပင်မျိုးပေါင်း(၁၅ဝ) ပေါက်ရောက်ရှင်သန်ခဲ့တယ်လို့ သိရှိရပါတယ်။ မြန်မာ့သစ်တောကြီးတွေမှာ ကျွန်း၊ ပျဉ်းကတိုး၊ ကညင်၊ အင်၊ ပိတောက်၊ သစ်ကတိုး၊ ကုက္ကိုလ်၊ တောင်တမန်၊ ကညောင်၊ သင်္ဃန်း၊ စကားဝါ၊ အင်ကြင်း၊ ကြက်မောက်၊ တမာ၊ ခရေ၊ ပုန်းညက်၊ သင်္ဂဒူ၊ တမန်လ၊ ကျွန်းဖို၊ သစ်ခရား၊ ဂမုန်း၊ မျောက်ချော၊ ဒန်း အစရှိတဲ့ သစ်မျိုး ပေါင်း(၁၅)တို့ဟာ ရှင်သန်ပေါက်ဖွားခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုအခါမှာတော့ ဒါတွေဟာ ပုံပြင် တစ်ပုဒ်လိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုအဆိုးရွားဆုံးတိုင်းပြည်ထဲမှာ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်က ကြေကွဲစွာနဲ့စာရင်းပါရှိသွားပါတယ်။ ပြည်တွင်းက စီးပွားရေးတစ်ချို့နဲ့ နိုင်ငံခြားကလာရောက်သူ တစ်ချို့က အမျှော်အမြင်ကင်းမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကြောင့်မို့လို့ ပျက်စီးဆုံးရှုံးတာတစ်ပိုင်း ပြည်ပကနေ သစ်ခိုးထုတ်ယူမှုတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးတာတစ်ပိုင်း တော်တော်ကြေကွဲစရာကောင်းတဲ့ အခြေအနေ တွေကိုကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ အရင်းစစ်အမြစ်မြေကဆိုသလို ပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာခေတ်အဆက်ဆက် နိုင်ငံရေးသြဇာကိတ္တိမချို့တဲ့အားနည်းနေခဲ့တာတွေ၊ နိုင်ငံရေးဆိုင်ရာချွတ်ခြုံကျဒဿနတွေကြောင့်မို့လို့ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာတဲ့သူတွေဟာ အခုအချိန်ထိ ဂုဏ်သိက္ခာမဲ့တဲ့လုပ်ရပ်တွေကိုလုပ်ကိုင်နေတာကို နောက်ဆုံးမှတ်တမ်းများအရ သိရှိရပါတယ်။ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လ ၂ဝရက်နေ့က လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာ အစိုးရသစ်ကာလ ကျွန်းက (၆၇၄.၁၉၇၄)သန်း၊ သစ်မာ (၅၆.၇၉၅၁)သန်း၊ အခြားသစ် (၉၁၂၁.၂၇၅၂)သန်း၊ စုစုပေါင်း တန်ချိန်(၉၈၅၂.၂၆၇၇) ဖမ်းဆီးရမိကြောင်း ကချင်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်က ကချင်ပြည်နယ်လွှတ်တော် မှာ တင်ပြတာကိုကျွန်တော်တို့သိရှိရပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး ကနေပြီးတော့ ၂ဝ၁၇ခုနှစ် မတ်လ ၂၁ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်း ကချင်ပြည်နယ် နှင့်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းဒေသများမှာ တရုတ်နိုင်ငံကိုခိုးထုတ်မည့်သစ်တန် (၉ဝဝ)ကျော်၊ ယာဉ်စီးရေ (၁၄၇)စီးနှင့် တရုတ်နိုင်ငံသားများကိုလည်း ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ ဖမ်းဆီးပေးခဲ့သူအပေါင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ထိရောက်တဲ့ ပြစ်ဒဏ်များကိုလည်း ပေးဖို့ တိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆက်လက်ပြီး ဖမ်းဆီးပေးဖို့ကိုလည်း ကျွန်တော်တို့အမြဲအားပေး နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ သစ်စိုက်ကွက်တွေကို စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာ အားနည်းတာ နောက်တစ်ခါ ပြည်တွင်းမှာလည်း စနစ်တကျထိန်းသိမ်း နိုင်မှုအားနည်းတာကိုသွား တွေ့ရှိရပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ခုတ်ထားပြီးသားသစ်လုံးတွေကို ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီပြီးတော့ပစ်ထားခဲ့တဲ့အတွက် ကြောင့် ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုတွေတွေ့ရှိရတယ်။ ဒါတွေဟာ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြည်သူတွေရဲ့ဘဏ္ဍာငွေ ဖြစ်နေပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းနေရာတစ်ချို့မှာ ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အခုအချိန်ထိ တစ်ချို့နေရာမှာ သစ်လုံးတွေရာနဲ့ချီပြီး နှစ်ကာလများစွာစုပုံထားတာကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာ စက်ဆန်းရပ်ကွက် အထက် ပုဇွန်တောင်လမ်းမှာဆိုလျှင် ဆယ်စုနှစ်နှင့်ချီပြီးတော့ သစ်လုံးတွေကိုစုပုံပြီးထားခဲ့တာကိုတွေ့ရှိ ရပါ တယ်။ ဒါတွေဟာ တကယ်တော့နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘဏ္ဍာငွေတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတွေဟာ တစ်ချို့သစ်တွေ ဟာ ဆွေးမြေ့ပြီးတော့အရောင်အဆင်းတွေလည်း ပျက်ယွင်းလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါတွေကို ဘယ်သူ တွေ တာဝန်ရှိပြီးတော့ ဘယ်သူတွေဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေလဲဆိုတာကို သိရှိလိုပါတယ်။ အရင်တုန်း ကတော့ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းကော်ပိုရေးရှင်းကနေ တာဝန်ယူပြီးလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ ကျွန်တော်တို့ကြားသိရပါတယ်။ ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဏသတနမ ဏသငညအ နဲ့တင်ပြ ခွင့်ပြုပါ။ ဒါကတော့ အခုအချိန်ထိ လက်ရဲဇက်ရဲနဲ့သစ်တွေခိုးထုတ်နေတဲ့ မှတ်တမ်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဟံထွန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်အောင်၏ မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် စက်ဆန်းရပ်ကွက်အတွင်းရှိ စက်ဆန်းသစ်ဆိပ်မြေနေရာသည် မြန်မာ့သစ် လုပ်ငန်းမှ မြန်မာ့မီးရထားပိုင်(၄.၈)ဧကရှိမြေနေရာအား ၁၉၇၄ခုနှစ်မှစတင်၍ နယ်သစ်ထုတ်လုပ်ရေး ဒေသအသီးသီးမှ မီးရထားတွဲများဖြင့်သယ်ယူလာသော မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းပိုင်သစ်လုံးများအား ခေတ္တစုပုံ၍ အခြားမြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းပိုင်သစ်ဆိပ်များသို့ ထပ်မံရွေ့ပြောင်းခြင်း၊ ရွေ့ပြောင်း ရန်နေရာအခက်အခဲရှိပါက အဆိုပါသစ်ဆိပ်၌ပင် တင်ဒါစနစ်ဖြင့်ရောင်းချခြင်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ မြန်မာ့မီးရထားပိုင်စက်ဆန်းသစ်ဆိပ်အား ၂ဝ၁ဝ-၂ဝ၁၁ဘဏ္ဍာ နှစ်မှစ၍ တစ်နှစ်လျှင်ငှားရမ်းခငွေကျပ် (၅၆.၆၆)သိန်းဖြင့် မြန်မာ့မီးရထားသို့ နှစ်စဉ်မြေငှားရမ်းခ ပေးသွင်း၍ မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်း၏ အငှားသစ်ဆိပ်အဖြစ်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ လက်ရှိစက်ဆန်းသစ်ဆိပ်ရဲ့ ကျွန်းသစ်လုံးလက်ကျန်အခြေအနေမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ (က) ကျွန်းသစ်လုံးတင်ဒါစနစ်ဖြင့် ကုမ္ပဏီအသီးသီးသို့ရောင်းချပြီး (၁၉၉၃)တန်ရှိပါတယ်။ (ခ) ကျွန်းသစ်လုံးတင်ဒါစနစ်ဖြင််ရောင်းချရန်ကျန် (၁ဝ၃ဝ)ခန့်ဖြစ်ပါတယ်။ စုစုပေါင်းဒီသစ်ဆိပ်မှာ (၃ဝ၂၃)တန်ရှိပါတယ်။ ရောင်းချပြီး ကျွန်းသစ်လုံး (၁၉၉၃)တန်မှာ ကုမ္ပဏီများထံမှသစ်ဖိုးငွေရရှိပြီး သစ်သယ်ယူခွင့်အမိန့် ထုတ်ယူပြီးသောသစ်များဖြစ်၍ သက်ဆိုင်ရာကုမ္ပဏီများမှ သယ်ယူရန်ကျန် ရှိသော သစ်များဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်ရှိသော မြန်မာ့သစ်လုပ်ငန်းပိုင်ကျွန်းသစ်လုံးလက်ကျန်(၁ဝ၃ဝ) တန်အား သစ်ဈေးကွက်အခြေအနေနှင့် ဈေးနှုန်းအတက်အကျပေါ်မူတည်၍ လာမည့်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ များတွင် လေလံရောင်းချရန်အတွက် လက်ပုံထိုင်ဆောင်ရွက်ပြီးသစ်များဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဆန်း သစ်ဆိပ်သည် နှစ်စဉ်နယ်ဒေသအသီးသီးမှ မီးရထားဖြင့်သယ်ယူလာသည့် သစ်အဝင်အထွက်လုပ်ငန်း ပုံမှန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောသစ်ဆိပ်ဖြစ်ပြီး ကျွန်းသစ်လုံးလက်ပုံများသာထားရှိသည့်အတွက် ဆွေးမြေ့မှုများမရှိနိုင်သော ကျွန်းသစ်လုံးလက်ပုံများဖြစ်ပါတယ်။ စက်ဆန်းသစ်ဆိပ်တွင် ယခုလက်ကျန် ရှိနေသောကျွန်းသစ်လုံးများအနက် သုံးပုံနှစ်ပုံခန့်မှာကုမ္ပဏီအသီးသီးသို့ရောင်းချပြီး သစ်ဖိုးငွေရရှိ ပြီးဖြစ်ပါသည်။ ကျန်ရှိသောသစ်လုံးများကိုလည်း နိုင်ငံတော်အတွက်အကျိုးအမြတ်အများဆုံးရရှိ အောင် အချိန်နှင့်တပြေးညီစီစဉ်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။ အားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ (၄)မိနစ်ပြည့်လျှင် အချက်ပြပေးပါ။
ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်တွင် စက်မှုဇုန်အမှတ်(၁၊ ၂၊ ၃)နှင့် (၁၄၁၊ ၁၄၃၊ ၁၄၄) ရပ်ကွက် များတွင်လည်း စက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်လျက်ရှိရာ စက်မှုဇုန်များမှ ပြာမှုန်များ၊ မီးခိုးမှုန်များ၊ လုပ်ငန်းသုံးအမှုန်အမွှားများကြောင့် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကိုများစွာထိခိုက်နိုင်ပြီး ၎င်းမြေပေါ်တွင် စိမ်းလန်းမြေ၊ သစ်ပင်သစ်တော၊ တောအုပ်များထူထောင်ပေးခြင်းဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းပြီး လေကောင်း လေသန့်ရရှိကာ ဂေဟစနစ်ကောင်းမွန်လာစေရေးတို့အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ စီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်မြေပေါ်တွင် စိမ်းလန်းမြေ၊ သစ်ပင်သစ်တော၊ တောအုပ်များထူထောင်ပေးခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကိုသိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းနိုင်မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းနိုင်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ။ ။အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်တို့ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်မှာ စက်မှုဇုန်များဝန်းရံလျက်ရှိပါ တယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်မှာ စက်မှုဇုန်အမှတ် (၁၊ ၂၊ ၃)နှင့် (၁၄၁၊ ၁၄၃၊ ၁၄၄)ရပ်ကွက်များ စုပေါင်းထားတဲ့ ရွာသာကြီးစက်မှုဇုန်လည်းရှိပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)အနီးအနားမှာဆိုရင် ဒဂုံမြို့သစ်(မြောက်ပိုင်း)စက်မှုဇုန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)စက်မှုဇုန်၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)စက်မှုဇုန်နှင့် ကျီစုစက်မှုဇုန်၊ သာကေတစက်မှုဇုန်တို့ဝန်းရံလျက်ရှိပါတယ်။ ၄င်းစက်မှုဇုန်များဝန်းရံလျက်ရှိတဲ့အတွက် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်ရဲ့ လူနေရပ်ကွက်များအပေါ် စက်မှုဇုန်ထွက် ပြာမှုန်များ၊ မီးခိုးမှုန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအမှုန်များ ကျရောက်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ ၄င်းအပြင် ရန်ကုန်တစ်တိုင်းလုံး မှာဆိုလျှင်လည်း စက်မှုဇုန်(၂၉)ဇုန်ရှိပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တော်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမြို့တော် ဖြစ်သလို တစ်နိုင်ငံလုံးမှာလည်း စက်မှုဇုန်အများဆုံးတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြို့တော်ကိုချဲ့ထွင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ စက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလည်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာ မလွဲပါဘူး။ ၄င်းစက်မှုဇုန်လုပ်ငန်းများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အတူ မီးခိုးမှုန်များ၊ ပြာမှုန်များ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသုံးအမှုန်များလည်း ထူထပ်စွာပါလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားဘူးဆို လျှင် နောင်အခါမှာ ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မြို့ဟာ တရုတ်ပြည်မကဲ့သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်သူ/ရန်ကုန်သား များဟာလည်း လေကိုဝယ်ရှုရမည့်အဖြစ်မျိုးနှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကိုလည်း ဆိုးရွားစွာထိခိုက် မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းမှာ တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့)စီမံကိန်းအတွက် (၁၃၂၈၆)ဧက၊ တွံ့တေး-ဒလမြို့သစ်စီမံကိန်းအတွက် (၄၉၇၉)ဧက၊ ထန်းတပင်မြို့နယ် (၂၆၉၄၂)ဧက၊ မှော်ဘီမြို့နယ် မှာ (၆၅၈၉)ဧက၊ လှည်းကူးမြို့နယ်မှာ (၆၈ဝ၁)ဧကစသည်ဖြင့် ရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးမှစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့ မြေဧကများစွာကျန်ရှိနေပါတယ်။ များစွာဝမ်းသာမိပါတယ်။ ၄င်းမြေများ ပေါ်မှာ စိမ်းလန်းသောမြေများ၊ ွမနနည ဇုန်များ၊ သစ်တောသစ်အုပ်များ ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သစ်တောသစ်အုပ်များလည်း နှစ်ရှည်တဲ့အတွက် မြေနေရာသတ်မှတ်ပြီးတော့ ကြိုတင် စိုက်ပျိုးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီသစ်တောများကြောင့် ရာသီဥတုမျှတခြင်း၊ ကျေးငှက်များနားခိုနိုင် ခြင်း၊ မြေဆီလွှာကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းစသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ဂေဟစနစ်ကိုလည်း မျှတရာ ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ သာကေတစက်မှုဇုန်၊ တောင်ဥက္ကလာပစက်မှုဇုန်တွေ အနီးအနားမှာ မြေမရှိတော့တဲ့အတွက် ွမနနည ဇုန်များထူထောင်ဖို့မရနိုင်ပါဘူး။ သို့သော်လည်း ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်မှာတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ စီမံခန့်ခွဲနိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေများစွာ ကျန်ရှိနေပါတယ်။ ၄င်းမြေများပေါ်မှာ စိမ်းလန်းသောမြေများ၊ သစ်ပင်၊ သစ်တော၊ တောအုပ်များ ထူထောင်ပေးခြင်းအားဖြင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းပြီး လေကောင်းလေသန့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ စက်မှုလုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတာနှင့်အမျှ လေကောင်းလေသန့်ရရှိရေးဟာလည်း ကျန်းမာရေး အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ တောင်ဒဂုံမြို့နယ်ရဲ့မြို့သူမြို့သားများအတွက် ရည်ရွယ်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့တောင်ဒဂုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မြေစီမံခန့်ခွဲပိုင်ခွင့်ရှိတဲ့မြေများပေါ်မှာ စိမ်းလန်းသောမြေများအဖြစ် သစ်ပင်၊ သစ်တော၊ သစ်အုပ်များ ထူထောင်ပေးနိုင်ခြင်း၊ ဆောင်ရွက် ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် မေးမြန်းအပ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဦးဟံထွန်း၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တောနှင့်စွမ်းအင်ဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများနှင့် ဧည့်သည်တော်များခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းနိုင်ရဲ့ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်းကို ကျွန်တော်ကဖြေကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း) နေရာများသို့ ကျွန်တော်တို့(၅)နှစ်စာ အပင်ဖြန့်ဝေမှုစာရင်းတန်ဖိုး ကျွန်တော်ဖော်ပြသွားမှာဖြစ်ပါ တယ်။ ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခုနှစ်မှာ စိုက်ပျိုးပင် (၃ဝ၈၅၂)ပင်၊ ၂ဝ၁၃-၂ဝ၁၄ခုနှစ်မှာ (၁၈၈၅)ပင်၊ ၂ဝ၁၄-၂ဝ၁၅ခုနှစ်မှာ (၃၉၃၈ဝ)ပင်၊ ၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ခုနှစ်မှာ (၃၂၁၈၉)ပင်နှင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုဘဏ္ဍာနှစ်မှာ (၁၈၂၅ဝ)ပင် စုစုပေါင်းအပင်(၁၃၈၇၅၆)ပင် ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)ဒေသကို ဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုနှစ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း လူထုဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးခြင်း ပျိုးပင်ပေါင်း (၈ဝ၃၃၅ဝ)ပင် အခမဲ့ဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးပြီးစီးပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ စိုက်ပျိုးပြီးတဲ့အပင်များ အနက်မှ သက်ဆိုင်ရာဌာနရဲ့တင်ပြချက်အရ ၇ဝ%ခန့် အောင်မြင်ဖြစ်ထွန်းလျက်ရှိပါတယ်။ လာမည့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ခုနှစ်မှာ ရရှိမည့်ရန်ပုံငွေအတိုင်းအတာအရ လူထုဖြန့်ဝေစိုက်ပျိုးခြင်းပျိုးပင်ပေါင်း (၆၁ဝဝဝဝ)စိုက်ပျိုးမည်ဖြစ်ပြီးတော့ ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)အတွက် အပင်(၁၇၅ဝဝ)ပင်အား ဖြန့်ဖြူးပေး နိုင်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်း တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှစီမံခန့်ခွဲခွင့်ရှိသော ဒဂုံမြို့သစ်(တောင်ပိုင်း)မြို့နယ်မြေပေါ်တွင် မြို့နယ်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် စက်မှုဇုန်တာဝန်ရှိ သူများ၊ အစိုးရအဖွဲ့မှ စိုက်ပျိုးရန်မြေနေရာစီစဉ်ဆောင်ရွက်၍ သစ်တောဦးစီးဌာနအနေဖြင့် လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းအသီးသီးပူးပေါင်း၍ ဌာနအနေဖြင့်လည်း သစ်ပင်၊ သစ်တောများ စိုက်ပျိုးထူထောင်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။ အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် (၁၆၈)ရပ်ကွက်အပိုင်နှင့် (၆၈)ရပ်ကွက်အပိုင် (၃နှင့်၄)တို့ တွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးပါသောကြောင့် မည်သည့်ကာလ၊ မည်သည့်အချိန်တွင်လျှပ်စစ်မီး ရရှိအောင် မည်သို့စီမံဆောင်ရွက်ပေးမည်ကိုသိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇင်မင်းထွေး မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဇင်မင်းထွေး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ။ ။ လေးစားရပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများအားလုံး မင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်။ ကျွန်တော် ကတော့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂)မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇင်မင်းထွေးဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် (၁၆၈)ရပ်ကွက်နှင့် (၆၈)ရပ်ကွက်အပိုင် (၃နှင့်၄)တို့မှာ လျှပ်စစ်မီးမရ ရှိသေးပါသောကြောင့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများမှာ လျှပ်စစ်မီးရရှိလာပါက ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် ပြည်သူ့ဘဝများပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လူမှုဘဝ လုံခြုံရေးသည်လည်း ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာပြီး (၆၈)ရပ်ကွက်အပိုင်(၃နှင့်၄)ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများမှာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးစသည့် ပြည်သူ့ဘဝများပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရေး အတွက် လျှပ်စစ်မီးမှာမရှိ မဖြစ်လိုအပ်သောအရာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသော ရပ်ကွက် အပိုင်များတွင် လျှပ်စစ်မီးရရှိလာပါက ပြည်သူ့ဘဝများပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှာဖြစ်ပြီး ဒေသ အတွက်လည်း ပိုမိုအကျိုးရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်မီးရရှိသောပြည်သူများ လျှပ်စစ်မီးပြတ်တောက် ပါက အဆင်မပြေမှုများနှင့် အခက်အခဲများကို ခဏတာတွေ့ကြုံနေရသော်လည်း ကျွန်တော့်ရဲ့ မဲဆန္ဒနယ်မြေဖြစ်သော ဒဂုံမြို့သစ် (ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ရှိ အချို့သောရပ်ကွက်အပိုင်များတွင် လျှပ်စစ်မီး မရရှိပါသောကြောင့် ပြည်သူများမှာနေ့စဉ်နှင့်အမျှ အဆင်မပြေမှုများနှင့် အခက်အခဲများတွေ့ကြုံ ခံစားနေရပါတယ်။ သို့ပါသောကြောင့် ပြည်သူများ၏အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါရန်အတွက် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ရိုသေလေးစားစွာမေးမြန်းလိုသည်မှာ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် တွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသော (၁၆၈) အပိုင်(၂)နှင့် (၆၈)ရပ်ကွက်အပိုင်(၃နှင့်၄)ရပ်ကွက်နေ ပြည်သူများ လျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့မှ မည်သည့်ကာလ၊ မည်သည့် အချိန်တွင် လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးသော ရပ်ကွက်အပိုင်များလျှပ်စစ်မီးရရှိအောင် မည်သို့စီမံဆောင်ရွက် ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊ စက်မှုလက်မှုနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားရပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စာလှယ်တော်ကြီး များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဝန်ကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော် များအား မင်္ဂလာပါရှင်။ ကျွန်မအနေနဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇင်မင်းထွေး၏မေးခွန်းကို ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၁၆၈)ရပ်ကွက် အပိုင်(၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄၊ ၅)ဟူ၍ အပိုင်(၅)ပိုင်ရှိပါတယ်။ မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာနစာရင်းအရစုစုပေါင်းလူဦးရေ (၁ဝ၅၁၅)ဦး၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၃၇၂)စုနှင့် အိမ်ခြေ (၂၃၃၅)ခုရှိပါတယ်။ (၁၆၈)ရပ်ကွက်အတွင်း လက်ရှိတွင်စုစုပေါင်း ွှမညျေ်သမာနမ (၅)လုံး၊ ၁၁။ ဝ.၄ုဠ ၂ဝဝုဠဗ နှစ်လုံးနှင့် ၁ဝဝုဠဗ တစ်လုံး၊ ၃၆ဝုဠဗ တစ်လုံး၊ ၃၁၅ုဠဗ တစ်လုံးဖြင့် ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားပြီး မီးလင်းမှု ၇ဝ%ရှိပါတယ်။ မေးခွန်းတွင်မေးမြန်းထားသော (၁၆၈)ရပ်ကွက် အပိုင်(၂)ရှိ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ဘယကျော်ထင်လမ်းနှင့် လှသိင်္ဂီလမ်းတွင် လူဦးရေ(၁ဝဝဝ)ဦးနှင့် အိမ်ခြေ (၂၆ဝ)ခန့်ရှိပါတယ်။ အပိုင်(၂)တွင် လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓါတ်အားမရရှိသေးသော တရားဝင် နေထိုင်သည့်ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် ၁၁ုဠ ဓါတ်အားလိုင်းပေ (၁၆ဝဝ)ခန့်၊ ၁၁၆.၆။ဝ.၄ုဠ ၂ဝဝုဠဗ ွှမညျေ်သမာနမ (၁)လုံး၊ ၁ဝ.၄ုဠ ဓါတ်အားလိုင်း ပေ(၃ဝဝဝ)ခန့် ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ် (၆၈) ရပ်ကွက်တွင် မြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနစာရင်းအရ စုစုပေါင်းလူဦးရေ (၄ဝ၃၈)ဦး၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၇ဝ၈)စုနှင့် အိမ်ခြေ (၆၆၅)ခုရှိပါတယ်။ (၆၈)ရပ်ကွက်အတွင်း လက်ရှိတွင် စုစုပေါင်း ွှမညျေ်သမာနမ (၂)လုံး၊ ၁၁။ ဝ.၄ုဠ ၅ဝဝုဠဗ (၁)လုံးနှင့် ၂ဝဝုဠဗ (၁)လုံးဖြင့် ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးထားပြီး မီးလင်းမှု ၅ဝ%ခန့်ရှိပါတယ်။ မေးခွန်းတွင်မေးမြန်းထားသည့် (၆၈) ရပ်ကွက် အပိုင်(၃နှင့် ၄)တွင် စာရင်းအရစုစုပေါင်းလူဦးရေ (၁၂ဝဝ)ဦးခန့်နှင့် အိမ်ထောင်စု (၂၇ဝ) နီးပါးရှိပါတယ်။ (၆၈)ရပ်ကွက် အပိုင်(၃နှင့် ၄)တွင် လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓါတ်အားမရရှိသေးသော တရားဝင်နေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် ၁၁ုဠ ဓါတ်အား လိုင်းပေ (၂၆ဝဝ)ခန့်၊ ၁၁၆.၆။ ဝ.၄ုဠ ၂ဝဝုဠဗ ွှမညျေ်သမာနမ (၁)လုံး၊ ဝ.၄ုဠ ဓါတ်အားလိုင်း ပေ(၃ဝဝဝ)ခန့်ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ဟာ ၁.၅.၂ဝ၁၅ရက်နေ့မှစတင်၍ ဃသညျကူအညေအ ှုညအနမညအေငသညေူကုမ္ပဏီလီမိတက်မှ င်္မညေခ့ငျနိ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ င်္မညေခ့ငျနိ ကုမ္ပဏီများ၏ အဓိကတာဝန်မှာ ၁၁ုဠ နှင့်အောက် ဓါတ်အားစနစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိဖြစ်ပါတယ်။ (၁၆၈)ရပ်ကွက် အပိုင်(၂)နှင့် (၆၈)ရပ်ကွက် အပိုင်(၃နှင့် ၄)အတွင်း လူနေအိမ်ခြေစိပ်သောလမ်းများတွင် တရားဝင် နေထိုင်သည့် ရပ်ကွက်နေပြည်သူများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် င်္မညေခ့ငျနိ ကုမ္ပဏီသို့ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြား ထားပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးသွား နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါသည်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ခေတ္တ(၁၅)မိနစ်နားပါမယ်။ အခမ်းအနားမှူး။ ။ ဥက္ကဋ္ဌပြန်လည်ထွက်ခွာပါ့မယ်ရှင်။
ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စစ်ပင်တောင်အောက်ရပ်ကွက်တွင် အိမ်ခြေ(၁ဝဝ)ခန့် ရှိ၍ အခုအချိန်ထိ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးပါသဖြင့် ဓါတ်တိုင်များနှင့်မီးကြိုးများသွယ်တန်း၍ လျှပ်စစ်မီးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်မောင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးကျော်ကျော်မောင်၊ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ။ ။ လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့်တကွ အားလုံးသောလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌကြီးခင်ဗျား။ ကျွန်တော်တို့ ဒဂုံမြို့သစ်(၄)မြို့နယ်မှာဆိုရင် ဒဂုံအရှေ့၊ ဒဂုံတောင်ပိုင်း၊ ဒဂုံဆိပ်ကမ်း မြို့နယ်တွေဟာဆိုရင် ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျနေပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနောက်ကျတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေ ကတော့ မြို့နယ်မှာအခြေခံလိုအပ်ချက်တွေဖြစ်တဲ့ လမ်းတွေ၊ လျှပ်စစ်မီးတွေလိုအပ်နေပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုအပ်တဲ့ဒဂုံ(၃)မြို့နယ်ကို လိုအပ်ချက်ဖြစ်တဲ့ လမ်းတွေ၊ လျှပ်စစ်မီးတွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးလိုပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အောက်ပါမေးခွန်းကို လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီး မှတဆင့် မေးမြန်းအပ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ စစ်ပင်တောင်အောက် ရပ်ကွက်တွင် အိမ်ခြေ(၁ဝဝ)ခန့်ရှိ၍ အခုအချိန်ထိ လျှပ်စစ်မီးမရရှိသေးပါသဖြင့် ဓါတ်တိုင်များနှင့် မီးကြိုးများ သွယ်တန်း၍ လျှပ်စစ်မီးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိလိုပါကြောင်းမေးမြန်းအပ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်မအနေနဲ့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်် အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးကျော်ကျော်မောင်၏ မေးခွန်းအားဖြေကြား မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်၊ မေးခွန်းမှာပါရှိတဲ့ စစ်ပင်တောင်အောက်ရပ်ကွက် ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ (၁၅၅)ရပ်ကွက်၊ (၁၆၆)ရပ်ကွက်၊ စစ်ပင်တောင်ရပ်ကွက်တို့မှာ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမေးမြန်းထားတဲ့ စစ်ပင်တောင်အောက်ရပ်ကွက်မှာ အိမ်မြေကွက်(၁ဝဝ)ခန့် ဖော်ထုတ်ထားသော်လည်း လက်ရှိတွင်(၅ဝ)ရာခိုင်နှုန်းခန့်သာ လူနေအိမ်ခြေဆောက်လုပ်ပြီး နေထိုင်လျက်ရှိပါတယ်။ စစ်ပင်တောင်အောက်ရပ်ကွက်ကို လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် သွယ်တန်းမည်ဆိုပါက ၁၁ုဠလိုင်း ပေ(၁၈ဝဝ)ခန့် ထရန်စဖော်မာ(၁)လုံးနဲ့ ရပ်ကွက်အတွင်း ဓါတ်အားဖြန့်ဖြူးရန် (ဝ.၄)ုဠဓါတ်အားလိုင်း ပေ(၄ဝဝဝ)ခန့် တပ်ဆင်တည်ဆောက်ရမည် ဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်လျှပ်စစ်ဓါတ်အားကော်ပိုရေးရှင်းသည် ၁.၁၂.၂ဝ၁၄ရက်နေ့မှစတင်ပြီး ဒဂုံမြို့သစ်(အရှေ့ပိုင်း)မြို့နယ်အား ဃငအပ ူငါ့အ ဏသတနမ နူနခအမငခကုမ္ပဏီကို င်္မညေခ့ငျနိ လုပ်ကိုင်ခွင့် ပြုထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်စစ်ပင်တောင်အောက်ရပ်ကွက် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် င်္မညေခ့ငျနိ ကုမ္ပဏီကို ညှိနှိုင်းပြီးတွန်းအားပေး ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ် ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်းမကြီးဘေး မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ် (၈၇-ကံဘဲ့)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄ဃ၂/အေ)တွင် တည်ရှိသော အဆောက်အဦအား မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ မြို့နယ်ခန်းမအဖြစ် သတ်မှတ်အသုံးပြုပေးနိုင်ရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးသိန်းဇော်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ မင်္ဂလာပါခင်ဗျား။ကျွန်တော်ကတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး မေးချင်တာကတော့ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကင်းလမ်းမကြီးဘေး မြေတိုင်း ရပ်ကွက်အမှတ်(၈၇-ကံဘဲ့)၊ မြေကွက်အမှတ်(၄ဃ၂/အေ)တွင်တည်ရှိသော မြေအကျယ်အဝန်း (ဝ.၇၃၉)ဧကခန့်၊ အလျား(၁၉၄)ပေ၊ အနံ(၁၇ဝ)ပေရှိမြေပေါ်မှာ အလျား(၅၆)ပေ၊ အနံ(၁၃ဝ)ပေ အကျယ်အဝန်းရှိတဲ့ အုတ်ခင်း၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုးတစ်ထပ်အဆောက်အဦအား ယခင်ကျွန်တော်တို့ ရန်ကင်းမြို့နယ်စတည်တဲ့ ၁၉၅၂-၁၉၅၅၃ခုနှစ် အဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက် ခဲ့ပြီးတော့ ရန်ကင်းမြို့နယ်ခန်းမအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့တဲ့အဆောက်အဦတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီး ၎င်းမြေနေရာတွင် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနရဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှုအောက်မှာရှိပါတယ်။ ယခုအခါအထက်ပါအဆောက် အဦနဲ့မြေနေရာမှာ ရန်ကင်းနေ့ကလေးထိန်းကျောင်းအဖြစ် ၁၉၆၅ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်နောက်ပိုင်းမှာ လာရောက်ဖွင့်လှစ်ထားရှိတဲ့အပြင် ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ အားကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့ ဝိတ်မခြင်း၊ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်းအဖြစ် အားကစားရုံအဖြစ်နဲ့လည်း အသုံးပြုလျက်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီအဆောက်အဦ စတင်တည်ဆောက်ပြီးချိန်မှစပြီးတော့ ၎င်းအခန်းမကို ကျွန်တော်တို့ရန်ကင်း မြို့နယ်ခန်းမအဖြစ်အသုံးပြုခဲ့ပြီး မြို့နယ်အဆင့်နေ့ထူးနေ့မြတ်များမှာ အခမ်းအနားများကျင်းပခြင်း၊ မင်္ဂလာဧည့်ခံပွဲများကျင်းပခြင်း၊ ကျွန်တော်တို့ ၁၉၆၃၊ ၁၉၆၄၊ ၁၉၆၅ခုနှစ်မှာ မယ်ရွေးပွဲများ၊ မောင်ရွေးပွဲများလည်း ကျင်းပတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကြက်တောင်ရိုက်ခြင်း၊ အလေးမခြင်း၊ ခြင်းလုံးခတ်ခြင်းများလည်း ဒီမြို့နယ်ခန်းမမှာဘဲ ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်း ကစားကြ ပါတယ်။ ယခုအခါ၎င်းရန်ကင်းမြို့နယ်ခန်းမကို လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ဌာနပိုင်အမည်ပေါက် ရရှိရေးအတွက် ၁.၇.၂ဝ၁ဝရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၅ဝ၈/ဝ၁၂/ထ(၅)/၂ဝ၁ဝဖြင့်လည်းကောင်း၊ ယခင်ကျောင်းအုပ်ကြီးမှလည်း ၂၈.၆.၂ဝ၁၁ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၃၃ဝ/ထောက်၄/ရကဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ရန်ကုန်(ရုံးချုပ်) မြေနှင့်အိမ်ရာဌာနမှ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်(ရုံးချုပ်)သို့ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း၊ ရန်ကင်းမူလတန်းကြိုကျောင်း၏ ၃၁.၅.၂ဝ၁၂ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၁၂/ထောက်(၄)/ရကဖြင့် လည်းကောင်း၊ ၂ဝ.၁၂.၂ဝ၁၆ရက်စွဲပါစာအမှတ်၊ ၄၂၁/ထောက်(၄)/ရက(၁၆)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရန်ကုန်တိုင်းလူမှုဝန်ထမ်းရုံးသို့လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း စိစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ လက်ရှိရန်ကင်းမြို့နယ် မှာ မြို့နယ်ခန်းမအဖြစ်အသုံးပြုရန်နေရာ မရှိပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ရန်ကင်းမြို့နယ်ဟာ အင်မတန်ကျဉ်း ပါတယ်။ အများပြည်သူကလည်း ထိုနေရာကိုမြို့နယ်ခန်းမအဖြစ် ပြန်လည်အသုံးပြုလိုကြောင်းတင်ပြ လာတာလေးတွေရှိပါတယ်။ မြို့နယ်အဆင့်အခမ်းအနားများ ကျင်းပတဲ့အခါမှာ နေရာမရှိတဲ့အတွက် ကျွန်တော်တို့က မိုးကောင်းဘုရားထဲကိုသွားပြီးတော့ သာသနာ့ဗိမာန်ထဲမှာ တချို့အခမ်းအနားတွေကို ကျင်းပရတဲ့ကိစ္စတွေရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က မြို့နယ်အဆင့်အခမ်းအနားများကို ပြည်ထောင်စုနေ့ လို၊ လွှတ်လပ်ရေးနေ့လို ဒီမြို့နယ်ခန်းမအဖြစ် ပြန်လည်သတ်မှတ်ပေးရင် ကျင်းပမယ့်နေရာအဖြစ် လည်းကောင်း၊ အားကစားပြိုင်ပွဲများကျင်းပလိုသောကြောင့်လည်းကောင်း၊ မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နှင့်အညီ မြို့နယ်ခန်းမအဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ် အသုံးပြုနိုင်ရေးအစီအစဉ် ရှိ/မရှိကို သိရှိလိုပါကြောင်း လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးမှတစ်ဆင့် ကြယ်ပွင့်ပြမေးလိုက်ရပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော်များ မင်္ဂလာပါ။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၂) ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မြေတိုင်းရပ်ကွက်အမှတ်(၈၇-ကံဘဲ့)၊ မြေကွက် အမှတ် (၄ဃ၂/အေ)၊မြေအကျယ်အဝန်း(၁၉၄x၁၇ဝ)ပေရှိမြေကွက်အား အစိုးရမြေအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၏ ရန်ကင်းအိမ်ရာစခန်းအဝန်းအဝိုင်းအတွင်းမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ မြေပြင်ပေါ်တွင် အလျား(၅၆x၁၃ဝ)ပေအကျယ်အဝန်းရှိ အုတ်ခင်း၊ အုတ်ကာ၊ သွပ်မိုး တစ်ထပ် အဆောက်အဦတစ်လုံး ဆောက်လုပ်ထားပြီး လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ မူလတန်းကြိုကျောင်း ကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်းစိစစ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ ရန်ကင်းအိမ်ရာ စီမံကိန်းအား ၁၉၅၈ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး အကျယ်အဝန်းဧရိယာ(၁၅၂.၁၈၆)ဧက ခန့်ရှိပါတယ်။ ရန်ကင်းအိမ်ရာစခန်းအတွင်း အ.ထ.ကကျောင်းများ၊ အ.လ.ကကျောင်းများ၊ အ.မ.ကကျောင်းများ၊ မူကြိုကျောင်းများပါဝင်ပြီး အခြားဌာနဆိုင်ရာအသုံးပြုမှုအနေဖြင့် မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေးရုံး၊ ဈေး၊ ရဲစခန်း၊ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနစုပေါင်းရုံးစသည့် ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများပါဝင်ပါတယ်။ ရန်ကင်းအိမ်ရာစခန်းများမှာ လက်ရှိမြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှု အခြေအနေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့နှင့် ပြည်ထောင်စုဆောက်လုပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာနပူးပေါင်း၍ မြို့ပြ ဖွံ့ဖြိုးမှုလုပ်ငန်းများ၊ မြို့ပြအဆင့်မြင့်တင်မှုလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက် ရန်အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ မြို့ပြပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးမှု ျွန-ိနလနူသစာနညအ ဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်အရနောက်တွင် လိုအပ်မည့်လူမှုရေးအဆောက်အဦများကို ထည့်သွင်း ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပါ၍ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၂) တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းဇော်၏မေးခွန်းပါ ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်း မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနမှ စီမံခန့်ခွဲလျက်ရှိသော ရန်ကင်းအိမ်ရာစခန်းအတွင်းရှိ လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ အသုံးပြု လျက်ရှိတဲ့ မူလတန်းကြိုကျောင်းကို မြို့နယ်ခန်းမအဖြစ်အသုံးပြုမည်ဆိုပါက လက်ရှိအသုံးပြု လျက်ရှိသည့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာန၏ သဘောထားကိုမေးမြန်းညှိနှိုင်းရန်ဖြစ်ပါတယ်။ နောင် အနာဂတ်မြို့ပြဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံကိန်းမှာ လိုအပ်သောမြို့နယ်ခန်းမ ပါဝင်ထည့်သွင်းဆောင်ရွက်သွား မည်ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ လေးစားပါတယ်ရှင်။
ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ရှိ (၇၈)ရပ်ကွက်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရေးနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိ၊ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက မည်သည့်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးမည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင် မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်၊ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ြွကရောက် လာသော ဧည့်သည်တော်များအားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအနေနဲ့တင်ပြချင်တာကတော့ ကျွန်မတို့ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ (၇၈)ရပ်ကွက်အား အိမ်ခြေပေါင်း(၅ဝဝ)ကျော်ရှိပြီး လူဦးရေ(၂ဝဝဝ)ကျော် ဗကဘုန်းတော်ကြီးအပါ အဝင်၊ ဘုန်းတော်ကြီးစာသင်တိုက်ပေါင်း(၂၂)ကျောင်းရှိသော ရပ်ကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရပ်ကွက်အားစတင်တည်ထောင်လာတဲ့ ၁၉၉ဝခုနှစ်မှစပြီးတော့ ယနေ့အချိန်ထိလျှပ်စစ်မီးများ မရရှိ သေးပါ။ ရပ်ကွက်အတွင်းသွားလာရန်လည်း လမ်းများမှာကွန်ကရစ်လမ်းများ မခင်းရသေးပါ။ သို့ဖြစ် ပါ၍ မြေသားလမ်းများကိုသာ အသုံးပြုနေရပြီး မီးလင်းဖို့အတွက်လည်း ပြည်သူလူထုမှာအခက် အခဲများရှိပါသည်။ အဆိုပါရပ်ကွက်အတွင်းရှိ ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသားပြည်သူများသည် လမ်းနှင့် လျှပ်စစ်မီးများအတွက် အခက်အခဲများစွာနဲ့ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၇၈)ရပ်ကွက်အတွင်း လျှပ်စစ်မီးသွယ်တန်းရေးနှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းပေးရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း ရှိ/မရှိကို သိရှိ လိုပါသည်။ ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ပါက မည်သည်အချိန်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မည်ကို သိရှိလိုပါသည်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော်များ မင်္ဂလာပါရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာဖြူဖြူခိုင်၏ မေးခွန်းကို ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်တွင် မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ မြေကွက်များဖော်ထုတ်ရောင်းချခဲ့ပြီးလျင် ရတနာအိမ်ရာအဆင့်မြင့်အိမ်ရာ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်၊ (၉၂)ရပ်ကွက်၊ (၉၄)၊ (၆၇)၊ (၁၆၇)ရပ်ကွက်၊ (၁၆၈)ရပ်ကွက်ရှိအချို့နေရာများအတွက် မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနက လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်၊ လျှပ်စစ်မန်နေဂျာရုံးမှတာဝန်ယူထားတဲ့ ရပ်ကွက်ပေါင်း(၄ဝ)ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာပေါင်း(၅)ရွာ တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုမေးခွန်းမှာပါရှိတဲ့ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း) မြို့နယ်၊ (၇၈)ရပ်ကွက်မှာ ရပ်ကွက်တစ်ခုလုံး၏ (၅)ပုံ(၁)ပုံခန့်သာ တရားဝင်လူနေထိုင်ပြီး ကျူးကျော် များတဲ့ရပ်ကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၏ စာရင်းအရ လက်ရှိ(၇၈)ရပ်ကွက် တွင် စုစုပေါင်းလူဦးရေ(၁၅၆၆)ဦး၊ အိမ်ထောင်စုပေါင်း(၃၄၇)စု၊ အိမ်ခြေ(၃၄၅)လုံးရှိပါတယ်။ (၇၈)ရပ်ကွက်အတွင်း တရားဝင်နေထိုင်သည့်လူနေအိမ်များ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် ၂ဝ၁၂-၂ဝ၁၃ခုဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် (၁၁ဝ.၄)ုဠယ(၃၁၅)ုဠဗ ထရန်စဖော်မာ(၁)လုံး တည်ဆောက် ဓါတ်အားပေးခဲ့ပြီး (၅ဝ)ရာခိုင်နှုန်းခန့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ရရှိရန်ကျန်ရှိနေတဲ့ (၇၈)ရပ်ကွက်တစ်ခြမ်းမှာ လူနေအိမ်ခြေကျဲသည့်အတွက် ကျန်ရှိနေခြင်းဖြစ်ပါ တယ်။ လက်ရှိလျှပ်စစ်ဓါတ်အားမရရှိသေးသော တရားဝင်လူနေထိုင်သည့် လူနေအိမ်များ၊ ဘုန်းကြီး ကျောင်းများနှင့် စာသင်တိုက်ကျောင်းများ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် (၁ဝ)ုဠဓါတ်အားလိုင်း ပေ(၂၅ဝ)ခန့်၊ (၁၁၆.၆)ုဠယ (၂ဝဝ)ုဠဗ ထရန်စဖော်မာ(၁)လုံးနှင့် (ဝ.၄)ုဠဓါတ်အားလိုင်း (၂၅၃ဝ)ပေခန့်ထပ်မံတည်ဆောက်ရန် လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒဂုံမြို့သစ်(ဆိပ်ကမ်း)မြို့နယ်ဟာ ၁.၅.၂ဝ၁၅ရက်နေ့မှစတင်၍ ဃသညျကူအညေအ ှုညအနမညအေငသညေူ ဃသ.ူအိမှ င်္မညေခ့ငျနိ လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ င်္မညေခ့ငျနိ ကုမ္ပဏီတွေရဲ့အဓိကတာဝန်အရ (၁၁)ုဠနှင့်အောက်ဓါတ်အား စနစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသဖြင့် (၇၈)ရပ်ကွက်အတွင်း တရားဝင်နေထိုင်သည့် လူနေအိမ်များ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်တိုက်ကျောင်းများ လျှပ်စစ် ဓါတ်အားရရှိရေးအတွက် င်္မညေခ့ငျနိ ကုမ္ပဏီသို့ ညှိနှိုင်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ပါသဖြင့် ၂ဝ၁၇-၂ဝ၁၈ဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် လျာထားဆောင်ရွက်ပေးသွားနိုင်ရေး တွန်းအားပေးဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါကြောင်း ဖြေကြားအပ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါတယ်ရှင်။
လက်ရှိဆောက်လုပ်ရေးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်ရှိ သီရိမွန် ပလာဇာနှင့်အိမ်ရာအား စည်းကမ်းတကျထိန်းသိမ်းပြုပြင်သွားနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးလက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ (၁၁၆၄)ပေရှိ စံပယ်လမ်းမကြီးမှာ ဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေ သည့်အတွက် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ၊ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့် အချိန်တွင်ဆောင်ရွက်ပေးမည်၊ မရှိပါက အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သည်ကို သိရှိလိုပါကြောင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်း မေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ဦးရန်ရှင်း၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ အားလုံးမင်္ဂလာပါ ခင်ဗျား။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျား။ ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမှာရှိတဲ့ သီရိမွန်ပလာဇာဟာ မြန်မာ နိုင်ငံအောက်ပိုင်းအတွက် လယ်ယာသုံးစက်ပစ္စည်းကိရိယာများဖြန့်ဖြူးရောင်းချနေတဲ့ တစ်ခုတည်း သောအရေးပါတဲ့ စင်တာကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီသီရိမွန်ပလာဇာဟာ လက်ရှိအနေအထားမှာ မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာသာရှိနေပြီး ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီလက်အောက်သို့ မလွှဲပြောင်းသေးဘူးလို့ သိရှိရ ပါတယ်။ အဲလိုအနေအထားမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် မြို့ပြနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအနေနဲ့လည်းပဲ စနစ်တကျကွပ်ကဲနိုင်ခြင်းမရှိသလို ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီအနေနဲ့လည်း တရားဝင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ထားတာ မရှိသေးတဲ့အတွက် စနစ်တကျကြပ်ကြပ်မတ်မတ်စီမံခန့်ခွဲ ဆောင်ရွက်သွားရန် အခက်အခဲများရှိနေပါတယ်။ အဲဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရှိရင် အချို့သော ဈေးဆိုင်ပိုင်ရှင်၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်များဟာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ပြုမူဆောင်ရွက်ကြမှုများကြောင့် မြို့တော်အင်္ဂါ ရပ်နှင့်မညီညွှတ်တာများကိုတွေ့ရှိနေရပါတယ်။ သာယာရေးအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းထားသော်လည်းပဲ ထိရောက်သော အရေးယူလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခွင့်များ သာယာရေးအဖွဲ့မှာမရှိတဲ့အတွက် စီမံခန့်ခွဲ ရေးပိုင်းများမှာ များစွာအခက်အခဲများကြုံတွေ့နေရပြီး စည်းကမ်းမဲ့လုပ်ရပ်များကို ကျွန်တော်တို့ ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။ ဏသတနမ ဏသငညအ ဖြင့် ရှင်းပြခွင့်ပြုပါခင်ဗျား။ အခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ပုံကတော့ လမ်းမပေါ်မှာ အခုလုံခြုံရေးရပ်နေတဲ့နေရာကတော့ လမ်းမရဲ့အလယ်တည့်တည့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လည်း တစ်ဖက်မှာရှိနေတဲ့ဆိုင်က အဲဒီမှာဝါးလုံးတန်းတန်းပြီးတော့ ဟိုးဘက်ခြမ်းမြေကိုပါ သူတို့ပိုင်တယ်ဆိုပြီးလုပ်ထားတဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ် ခင်ဗျား။ အခုမြင်နေရတဲ့ပုံကတော့ အများသွား လမ်းပေါ်မှာပစ္စည်းများကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့စုပုံထားတဲ့အတွက် အများကားသွားလာရန်အခက်အခဲ ဖြစ်ပြီး နေ့တိုင်းပြဿနာဖြစ်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုဒါလည်းပစ္စည်းအဟောင်းများကို ဒီလိုပဲ စည်းကမ်းမဲ့စုပုံထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ သာယာရေးအဖွဲ့မှပြောတဲ့အခါမှာလည်း တော်တော်လေး ပြောရခက်နေတယ်လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အခုဒီပုံကတော့ တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ မြေကွက်ကို မိမိပိုင်အဖြစ် ပန်းခြံများလာလုပ်ထားပြီးတော့ မှ မော်တော်ကားပါကင်များလုပ်ရန် ညှိနှိုင်းတဲ့အခါမှာ ခွင့်မပြုတာကို ကျွန်တော်တို့ကြားသိနေရပါတယ်။ အခုနေရာကတော့ အများဝင်/ထွက်သွားလာရတဲ့ ခန်းမကျယ် နေရာမှာ အတွင်းကဆိုင်ခန်းများမှစည်းကမ်းမဲ့ အခုလိုပစ္စည်းများလာရောက်ခင်းကျင်းပြီးတော့မှ စုပုံထားတာဖြစ်ပါတယ်။ အခုနေရာကတော့ ဒါပန်းခြံနေရာဖြစ်ပါတယ်။ ပန်းခြံနေရာမှာ အပန်းဖြေရ မယ့်အစား လူတွေဒီလိုပဲလာပြီးတော့မှ ပစ္စည်းတွေကိုစည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ ကာရံစုပုံထားကြတာကို မြင့်တွေ့နေရပါတယ်။ အခုဒီဟာကတော့ လူသွားစင်္ကြန်နေရာမှာ ပစ္စည်းများကိုစည်းကမ်းမဲ့စင်တွေ ထိုးပြီးတော့မှ သံဇကာတွေကာပြီးတော့မှပိတ်ပြီး တည်ဆောက်နေတဲ့အထိ တွေ့ရှိနေရတာဖြစ်ပါ တယ်ခင်ဗျား။ အခုဒီနေရာဟာလည်း အလားတူပါပဲ လူသွားစင်္ကြန်မှာပစ္စည်းတွေစုပုံထားပြီး အများသူငှာသွားလာလို့မရအောင် ဆောင်ရွက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ဒါ့အပြင်အနီး ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ ကျွန်းစိုက်ခင်းများမှာလည်း ကျူးကျော်တဲများဝင်ရောက်နေထိုင်ကာ ဒုစရိုက်များ ဆောင်ရွက်နေတာကို ကြားသိရပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လက်ရှိ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ သီရိမွန်ပလာဇာနှင့်အိမ်ရာကို စည်းကမ်းတကျ ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ရန်အတွက် ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ လက်အောက်သို့ လွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်သွားရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနှင့် မရှိက အဘယ်ကြောင့်ဆိုတာကို သိလိုပါတယ်။ အစီအစဉ်ရှိပါက မည်သည့်အချိန်မှာဆောင်ရွက်မည်ကို သိရှိလိုပါတယ်။ လေးစား အပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌခင်ဗျား။ ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယမေးခွန်းအနေ ဖြင့် အဲ့ဒီသီရိမွန်ပလာဇာဝင်းကြီးထဲမှာ အဓိကလမ်းမကြီးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ စံပယ်လမ်းဟာခင်းထားတာ နှစ်ပေါင်း(၂ဝ)ကျော်ကြာပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ယာဉ်အသွားအလာများခြင်းကြောင့် မိုးတွင်းကာလမှာ ရေအိုင်များဖြစ်နေခြင်း၊ ခြောက်သွေ့ရာသီမှာ ဖုန်ထခြင်းများကိုကြုံတွေ့နေရပြီး သွားလာရာတွင်လည်း ချိုင့်ကွက်များနှင့်လမ်းအပျက်အစီးများကို ရှောင်သွားနေရတဲ့အတွက် နေ့စဉ်အခက်အခဲများကြုံတွေ့ နေရပါတယ်။ နေထိုင်ကြသူများနှင့် ဈေးသာယာရေးအဖွဲ့က အစဉ်တစိုက်တင်ပြခဲ့ကြသော်လည်း ယခုတိုင်ထိထိရောက်ရောက် အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးမှုမရှိဘဲ မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နဲ့မညီတာကို တွေ့ရှိ ရပါတယ်။ ဒီသီရိမွန်အိမ်ရာနှင့် ပလာဇာဟာဆိုလို့ရှိရင် နိုင်ငံတော်ကိုအခွန်အခများစွာနေတဲ့ နေရာ ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်ကြောင့်မို့လို့ သီရိမွန်ပလာဇာအိမ်ရာဝင်းအတွက်မှာရှိတဲ့ အရှည်(၁၁၆၄)ပေအရှည်ရှိတဲ့ စံပယ်လမ်းမကြီးဟာ ဆိုးရွားစွာပျက်စီးနေတဲ့အတွက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ပေးရန် အစီအစဉ်ရှိ/မရှိနဲ့ မရှိပါက အဘယ်ကြောင့်ဆိုတာကို သိရှိလိုပါတယ်။ ကျေးဇူး တင်ပါတယ်ခင်ဗျား။
ဒေါ်နီလာကျော်၊ လျှပ်စစ်၊စက်မှုလက်မှုနှင့်လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီး ။ ။ လေးစားအပ်ပါသော ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌကြီးနှင့် လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်တော်များ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးများ၊ ဧည့်သည်တော်များ မင်္ဂလာပါရှင်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ် အမှတ်(၁) တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးရန်ရှင်း၏မေးခွန်းကို ဖြေကြားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၁)ရပ်ကွက်တွင် သီရိမွန်အိမ်ရာစီမံကိန်းကို ၁၉၉၅ခုနှစ် တွင် မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ယခင်မြို့ရွာနှင့်အိုးအိမ်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ယုဇနဆောက်လုပ် ရေးကုမ္ပဏီတို့အကျိုးတူပူးပေါင်း၍ ျြေအနမ ဏူညေရေးဆွဲ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါ တယ်။ အိမ်ရာစီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ပြီးနောက် စီမံကိန်းအဆောက်အဦများတွင် ဝယ်ယူ နေထိုင်ကျသူများဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည့် အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကို စုပေါင်းပိုင်အဆောက်အဦများ စီမံခန့်ခွဲရေးညွှန်ကြားချက်အမှတ်(၁/၉၇)အရ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး၊ အိမ်ရာကော်မတီက အိမ်ရာစီမံကိန်း ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများကို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါမှာလည်း သီရိမွန်အိမ်ရာစီမံခန့် ခွဲရေးကော်မတီအား သက်ဆိုင်ရာဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်။ သို့သော် လည်း လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးတင်ပြသွားသလိုပဲ ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့အတွက် ယခုအခါမှာ ၂၈.၃.၂ဝ၁၇နေ့မှာ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှနေ၍ ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့သို့ အိမ်ရာစီမံကိန်းများ၊ မြေများ၊ စက်မှုဇုန်များကိုလွှဲပြောင်း ပေးအပ်ထား ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မြို့ပြနှင့်အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ အိမ်ရာစီမံကိန်းကော်မတီနှင့် စည်ပင် သာယာရေးကော်မတီတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ကြီးကြပ်မှုနဲ့ ဒီအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိစ္စများနှင့်တကွ စံပယ်လမ်းမကြီးပြုပြင်ဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စတို့ကိုဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်လိုအပ်တဲ့ ကုန်ကျစရိတ်ကိုတွက်ချက်ပြီး ရန်ပုံငွေရရှိရေးအတွက် ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ လေးစားအပ်ပါတယ်ရှင်။
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအားဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းနှင့် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ဖြစ်သော ၁၇.၂.၂ဝ၁၆ရက်နေ့တွင် ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီသည် ၁၇.၂.၂ဝ၁၇ရက်နေ့တွင် သက်တမ်း(၁)နှစ်ပြည့်ပြီးဖြစ်သည့်အတွက် ကော်မတီ၏နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်သို့ ဖတ်ကြားတင်ပြရန်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်စန္ဒာမင်း၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်(၁) ။ ။ အားလုံး မင်္ဂလာပါရှင်။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီရဲ့ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇နှစ်ပတ်လည် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစီရင်ခံစာကို ကော်မတီရဲ့ ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ ကျွန်မ ဒေါ်စန္ဒာမင်းကနေပြီးတော့ တင်ပြအစီရင်ခံသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကို ၁၇.၂.၂ဝ၁၆ ခုနှစ်မှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီဟာ ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ် ခဲ့ပါတယ်။ ကော်မတီအနေဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုနှစ် ပထမ(၁)နှစ်တာကာလအတွင်း လုပ်ငန်းဆောင် ရွက်ချက်တွေကို ယခုအစီရင်ခံစာမှာ စုစည်းပြီးတော့တင်ပြထားပါတယ်။ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီကို တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၂)ဦးအပါအဝင် ကိုယ်စားလှယ် (၁၁)ဦးနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားပါတယ်ရှင်။ ဒီအစီရင်ခံစာမှာ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ၊ ရည်ရွယ်ချက်တွေ၊ ကော်မတီရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွေကို အသေးစိတ် ဖော်ပြအစီရင်ခံထားပါတယ်ရှင်။ ကော်မတီအနေဖြင့်တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာ ကော်မတီကို တင်ပြလာတဲ့ကိစ္စရပ်တွေနဲ့စပ်လျဉ်းပြီး ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်များကို ခေါ်ယူ ကြားနာခြင်းတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကို သုံးသပ်ချက်နှင့်တကွ အစီရင် ခံစာများတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ၎င်းအစီရင်ခံစာထဲမှနေပြီး ထင်ရှားတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကို ဖော်ပြရမယ်ဆိုရင် တော့ ရန်ကုန်မြို့တွင်အထပ်မြင့်အဆောက်အဦများ ရပ်ဆိုင်းထားခြင်းကိစ္စအပေါ်မှာ ဆောက်လုပ် ရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့နစ်နာမှုကိစ္စများ၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ (၇)ရပ်ကွက်၊ သာလ္လာဝတီလမ်း၊ အမှတ် (၁၆/အီး)တွင် ဒေါ်ပိုးဖြူမှ ဆိတ်ငြိမ်ရပ်ကွက်အတွင်း အထပ်မြင့်အဆောက်အဦ ဆောက်လုပ်နေမှု ကြောင့် ပတ်ဝန်းကျင်မှ နစ်နာသူ(၁ဝ)ဦးတို့ရဲ့ တိုင်ကြားလာခြင်းကိစ္စများ၊ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ရွှေတောင် ကြား၊ (၂)ရပ်ကွက်၊ ကုက္ကိုင်းရိပ်သာလမ်း၊ ခြံအမှတ်(၄၄/က) ခြံရှေ့တွင်လမ်းမြေကိုကျူးကျော်ပြီး တော့ တိုက်ဆောက်လုပ်မှုကို မြို့တော်စည်ပင်သာယာမှ အနေကြာဆိုသောအကြောင်းပြချက်နှင့် တိုက်ဆောက်ခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စအတွက် နစ်နာသူနှင့်လမ်းသူလမ်းသားတွေက တိုင်ကြားခြင်းကိစ္စများ၊ ဒဂုံစီးတီး(၁)စီမံကိန်းကိစ္စများ၊ ပုလဲကွန်ဒိုအိမ်ရာစီမံကိန်းအတွက် ပြည်သူတွေကတိုင်ကြားထားမှု ကိစ္စများ၊ ယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ရေပေးဝေရေးကော်မတီကိစ္စများ၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ ရွှေလင်ဗန်း စက်မှုဇုန်မှာ လယ်သမားအမည်ခံပြီးလူတစ်စုက စက်ရုံလုပ်ငန်းရှင်တွေကို ဥပဒေမဲ့ခြိမ်းခြောက်ငွေ တောင်းခံသည့်ကိစ္စများ၊ ရန်ကုန်မြို့သစ်စီမံကိန်းကိစ္စနှင့် မဟာရန်ကုန်မြို့ပြစီမံကိန်းကိစ္စများ၊ ကမာရွတ် မြို့နယ်၊ ယခင်ဆင်မလိုက်ကားဝင်းအတွင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ ွမညေိ ံညေအေ့ ံသျစငအေူ နိုင်ငံတကာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်တွေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဆေးရုံဟုတ်/ မဟုတ်ကို စစ်ဆေးသည့်ကိစ္စများ၊ မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ မင်္ဂလာဈေးသစ်ကိစ္စများ၊ အေးခဲ ကြက်သားများတင်သွင်းရန်ကိစ္စများ၊ အလုပ်ရှင် အလုပ်သမားများ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆက်ဆံရေး မပြေလည်လို့ပြဿနာများဖြစ်နေသည့်ကိစ္စများကို ကော်မတီအနေဖြင့် အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရသို့ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ ကော်မတီအနေနဲ့သုံးသပ်တင်ပြချက် များအပေါ်မှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့အနေဖြင့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှု၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေများကို လွှတ်တော်သို့ပြန်လည်အသိပေး ပြန်ကြားခြင်းတွေမရှိတာ တွေ့ရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆက်လက်ပြီးတော့ တစ်နှစ်တာစီမံကိန်းများအနေနှင့် ကျွန်မတို့ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီအနေဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်းမှာ ပုံမှန်အစည်းအဝေးများ (၁၇)ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ တစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာကော်မတီအနေနဲ့ အခြားသောလွှတ်တော် ရေးရာကော်မတီအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးမှာတာဝန်ရှိသူများ၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများမှ ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ ပညာရှင်များစသည်တို့နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီး အစည်းအဝေးဆွေးနွေးခြင်းကို (၂၆)ကြိမ်ပြုလုပ် ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကော်မတီအနေနဲ့ အစည်းအဝေးအကြိမ်စုစုပေါင်း (၄၃)ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှပုံမှန်(၄)ကြိမ်ခန့် ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အစီရင်ခံတင်ပြပါတယ်ရှင်။ ကျွန်မတို့ ကော်မတီဟာ စီမံကိန်းများ ဘတ်ဂျက်ငွေသုံးစွဲမှုတွေ၊ စီပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုတွေ အပေါ်မှာ လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့ကော်မတီဖြစ်လို့ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရ အဖွဲ့မှဆောင်ရွက်ခဲ့သော လုပ်ငန်းစီမံကိန်းများအပေါ်မှာ ကော်မတီရဲ့သုံးသပ်ချက်များကို တင်ပြပါ မယ်ရှင်။ ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရန်ပုံငွေစာရင်းမှာ ခုံးကျော်တံတား(၂)စင်း တည်ဆောက်မှုကို ဖျက်သိမ်းကာထွက်ရှိလာတဲ့ (၃၂.၂)ဘီလီယံကို ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်အပါအဝင် ရန်ကုန် မြို့တော်စည်ပင်သာယာနယ်နိမိတ်ပြင်ပမှာရှိတဲ့ မြို့နယ်များအတွင်း ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေဆောင်ရွက်ရာ၌ အောက်ပါအတိုင်းခွဲဝေခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိရပါတယ်။ လှည်းကူးမြို့နယ်ကိုတော့ (၃၉)ဘီလီယံ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ကို (၃၄)ဘီလီယံ၊ ကော့မှူးမြို့နယ် ကိုတော့ (၃၃)ဘီလီယံ၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်ကိုတော့ (၂၉)ဘီလီယံ၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်ကိုတော့ (၂၇)ဘီလီယံ၊ မှော်ဘီမြို့နယ်ကို (၂၅)ဘီလီယံ၊ သန်လျင်မြို့နယ်ကို (၂၄)ဘီလီယံ၊ ခရမ်းမြို့နယ် (၂၄)ဘီလီယံ၊ တွံတေးမြို့နယ်ကိုတော့ (၂၃)ဘီလီယံ၊ သုံးခွမြို့နယ်ကိုတော့ (၂၃)ဘီလီယံ၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်ကို (၂၂)ဘီလီယံ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့နယ်ကိုတော့ ကျပ်သိန်းပေါင်း(၆)ထောင် (၇)ရာကျော်ပေးပြီးတော့၊ ဆိပ်ကြီးခနောင်တိုမြို့နယ်ကိုတော့ ကျပ်သိန်း(၅)ထောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေမှုဟာ မြို့နယ်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ၊ ဆင်းရဲမွဲတေမှုအခြေအနေတွေပေါ်မှာ အခြေခံမှုမရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် ဘဏ္ဍာငွေခွဲဝေပေး မူဝါဒနှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိသလို စီမံကိန်းခန့်မှန်းချက် မူဝါဒနဲ့လည်း ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ အထပ်အမြင့်အဆောက်အဦများ ဆောက်လုပ်နေမှုကို ရန်ကုန်မြို့ပြရှုခင်းနဲ့ဆက်စပ်ပြီး ပြန်လည်ဆန်းစစ်ထိန်းသိမ်းကြပ်မတ်ရန်အတွက် ဟုဆိုကာ ယခင်အစိုးရမှပါမစ်ချထားပေးခဲ့တဲ့ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများကို အကန့်အသတ် မရှိရပ်ဆိုင်းကာ ရန်ကုန်မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နဲ့အညီ အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်မှုစိစစ်ရေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီး စစ်ဆေးနေကြောင်းကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်အကန့်အသတ်မရှိ ရပ်ဆိုင်းခဲ့မှု တွေကြောင့် ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေနဲ့ သွယ်ဝိုက်သောဆုံးရှုံးမှုတွေ၊ တိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးမှု တွေရှိခဲ့ပြီး နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကျဆင်းရခြင်း အကြောင်းအရင်းမှာလည်း တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သွား ခဲ့ရပါတယ်။ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် ဘဏ်ချေးငွေဖြင့်လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင် နေမှုကြောင့်လည်းကောင်း၊ အလုပ်သမားတွေကို အလုပ်မဖြုတ်ဘဲ လစာတွေပေးနေရခြင်းကြောင့် လည်းကောင်း၊ အောက်ခြေအလုပ်သမားပေါင်းများစွာဟာလည်း အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကာ အဆိုးဆုံးမှာ တော့လုပ်ငန်းအပ်နှံသူနဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်သူနှစ်ဦးကြားမှာ သဘောတူညီမှုတွေ၊ ယုံကြည်မှု ဆက်ဆံရေးတွေ ပျက်ယွင်းသွားရခြင်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရပါတယ်။ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက် တွက်ချက် ထားမှုအရ ဘီလီယံ(၅ဝ)ကနေ (၁ဝဝ)ကြားကို ဆုံးရှုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့ ဆုံးရှုံးခဲ့ရမှု တွေဟာ နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှု၊ နခသညသာငခ ှာုစခေအ ကိုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ စက်မှုဇုန်တွေမှာ လှည်ပတ်နေတဲ့စက်ရုံများရှေ့ကျူးကျော်တဲထိုးကာ လုပ်ငန်းရှင်တွေကိုငွေညှစ်ခြိမ်းခြောက်နေတဲ့ လူမိုက်ဆန်ဆန် လုပ်ဆောင်နေမှုများကို မြေယာအငြင်း ပွားမှုကိစ္စရပ်များဆိုပြီး တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရမှ တရားဥပဒေအရအရေးယူမှု ယခုအချိန်ထိမရှိခဲ့ သေးတာကြောင့် စက်ရုံပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းတွေဟာ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ငွေညှစ်ခြိမ်းခြောက်တဲ့သူတွေနဲ့ အပေးအယူလုပ်ပြီး ၎င်းတို့တောင်းတဲ့ငွေတွေကိုပေးလိုက်ကာ မိမိစက်ရုံပြန်လည် လည်ပတ်စေ အောင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ရပါတယ်။ ထို့အပြင် ဟန်ကျိုးပိုင်ရီအထည်ချုပ်စက်ရုံမှာ အလုပ်ရှင်အလုပ်သမား ပြဿနာတွေဖြစ်ပြီး အလုပ်သမားများက စက်ရုံအတွင်းမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတွေကိုရိုက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း၊ အုပ်ချုပ်သူနိုင်ငံခြားသားအပေါ်တွေမှာ ကိုယ်ထိလက်ရောက်ထိခိုက်မှုတွေ ရှိအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် နိုင်ငံခြားသံရုံးမှကြေငြာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော်လည်း စက်ရုံအတွင်းပစ္စည်းတွေရိုက်ချိုး ဖျက်စီးခဲ့သူတွေ၊ အလုပ်သမားဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပေါ်ဖို့ ခေါင်းဆောင်သူတွေကိုတော့ အရေးယူမှုလုံးဝ မရှိခဲ့ခြင်းဟာ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှင်းနှီးမြှပ်နှံရန်အတွက် ဝင်လာမဲ့သူတွေအတွက် အာမခံချက်များ မပေးနိုင်ကြောင်း ထင်ရှားနေပါတယ်။ အဓိကကတော့ စက်မှုလုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ အကြောင်းမျိုးစုံသော ဒုက္ခရောက်နေမှုတွေကို ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေဖြင့် ကာကွယ်မှုမပေးနိုင်ခြင်းကို လက်တွေ့ခံစားနေရတာတွေကို တွေ့ရှိရပါတယ်။ ပြည်ပပုဂ္ဂိုလ်မြှင့်တင်ပေးရန် ရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုဥပဒေ အရ သင့်လျော်သောအခွင့်အရေးများပေးရန်ဆိုတဲ့အချက်ဟာ စာရွက်ပေါ်မှာသာရှိပြီး အခွင့်အရေး ဖြစ်ပြီး၊ စာရွက်ပေါ်မှာသာပေးတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပြီး မြေပြင်အချက်အလက် အခြေအနေမှန်တွေနဲ့ ကင်းလွတ်နေကြောင်းကို တွေ့ရှိရကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်။ ြှ့ ယာဉ်လိုင်းတွေမှာ ယာဉ်စီးခတွေ အတွက်ကို ကဒ်စနစ်ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုပြီးတော့ ဒီကဒ်စနစ်နဲ့အသုံးပြုမယ်ဆိုလို့ အခုအသုံးပြုမဲ့ ကဒ်စနစ်များနဲ့ပတ်သက်ပြီး တင်ပြလိုပါတယ်။ ြှ့ ယာဉ်လိုင်းမှာ ဏပောနညအ လိုင်စင်(၈)ခု ချထားပေးရန်ရှိကြောင်းကို သိရှိရပါတယ်။ ကော်မတီမှာစုံစမ်းသိရှိချက်များအရ ၎င်း လိုင်စင်လုပ်ငန်း တွေဟာ ဗဟိုဘဏ်မှအသိအမှတ်ပြုပြီးတော့ မြန်မာ့ငွေပေးချေမှုအဖွဲ့အစည်း ဏြ့ နှင့်လည်း တရားဝင်ဆောင်ရွက်ခွင့်ရရှိထားတဲ့ ဃ့ငစ ဃမေိ ှအညေိမေိ ထားခြင်းလည်းမဟုတ်ကြောင်း သိရှိ ရပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ ျွနအငေူ ငွေပေးချေမှုတွေအတွက် ငွေသာကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ ငွေပေးချေရမဲ့အစား ဃျေ့ ျြေနိ ှပျအနာ ကိုပြောင်းသုံးစွဲမယ်ဆိုရင် ဃ့ငစ ဃမေိ ှအညေိမေိ ရရှိမှသာ သုံးစွဲသူတွေအတွက်လုံခြုံစိတ်ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်က သော်လည်းကောင်း၊ မြန်မာငွေပေးချေးမှုအဖွဲ့အစည်း ဏြ့ ကသော်လည်းကောင်း အသိအမှတ်ပြု ထားခြင်းမရှိတဲ့ နျေပ ဏပေယ ဗညပ ဏပေယ ဥု စတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် အစိုးရပိုင်ဘဏ် တွေမှာ အာမခံငွေတွေ၊ ီနစသျငအ တွေတင်ထားသင့်ပါတယ်။ ဒါဟာအများပြည်သူပိုင်ငွေတွေဖြစ်လို့ ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုမဖြစ်အောင် အထူးဂရုပြုဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း အကြံပြုတင်ပြအပ်ပါတယ်ရှင်။ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားနဲ့ အစိုးရများညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲများပြုလုပ်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ရလဒ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရန် ဆရာစံခန်းမ၌ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေး ပွဲများပြုလုပ်ခဲ့ရာ၌ ကုန်ကျစရိတ် များရှိခဲ့သော်လည်း အလုပ်ရှင်အတွက်ရော အလုပ်သမားအတွက်ပါ မူဝါဒလုပ်ငန်းစဉ်တစ်စုံတစ်ရာကို တိကျစွာမချမှတ်နိုင်ခဲ့သလို၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ အလုပ်သမားများ၊ ပြည်သူများသိရှိနိုင်ရန် လည်းဆွေးနွေးပွဲရလဒ်တွေကို ကြေငြာချက်ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် မထုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တာတွေ့ရှိရပါတယ်။ ၂ဝ၁၆ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအထိ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် တစ်ခုတည်းမှာ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားပြဿနာပေါင်းဟာ (၁၂၃၈)မှုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ စက်ရုံပိတ် သိမ်းခြင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ တွေ့ရပါတယ်။ စက်ရုံယာယီပိတ်သိမ်းခဲ့ရတဲ့ ရွှေမိစက်ရုံဆိုရင် မည်သည့်ပြစ်ချက်မှ ကြီးကြီးမားမားမတွေ့ရှိရဘဲ စက်ရုံပိတ်ကာစစ်ဆေးအဖြေရှာနေမှု ကြန့်ကြာ နေသည့်အတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေမှာဆုံးရှုံးမှုကြီးမားစွာရရှိခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးလုပ်ငန်းလျော့ချပြီး အလုပ်သမားတွေအလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်ကာ (၁ဝ)နှစ်ကျော် အရှိန်အဟုန်ကောင်းနဲ့ လည်ပတ်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေဟာ ပိုမိုတိုးတက်မှုမရှိလာဘဲ ဆုံးရှုံးမှုနဲ့သာနိဂုံးချုပ်သွားကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။သို့ပါ သောကြောင့် ဂျပန်နိုင်ငံမှစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်မှ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်တွေ့ဆုံစဉ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကိုနိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှပ်နှံမှုတွေ ဝင်ရောက်မှုများအား အဟန့်အတား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ စိန်ခေါ်ချက်များကြုံတွေ့နေရမှုနှင့် ယင်းသို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျပန်ကုမ္ပဏီ(၃၆)ခုကိုစစ်တမ်းကောက်ယူပြီး တွေ့ရှိရချက်များအပေါ်မှာ အကြံပြုတာ တင်ပြခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုဇုန်များအတွင်း တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုမရှိခြင်းသည် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူများအား မက်လုံးပေးနိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းဖြစ်အောင် ဖန်တီးရန်ဆိုတဲ့အချက်နှင့်လည်း လုံးဝဆန့်ကျင်နေ တယ်ဆိုတာ သုံးသပ်တွေ့ရှိရပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ယခုတင်ပြတဲ့အစီရင်ခံစာများအားလုံးကို ကျွန်မတို့ ကော်မတီအနေနှင့် ရိုးသားစွာတင်ပြပါတယ်လို့ အစီရင်ခံပါတယ်။ နိဂုံးချုပ်အနေနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီဟာ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်မှာ ၁၇.၂.၂ဝ၁၆ရက်နေ့မှာ စတင်ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပြီး ကော်မတီရဲ့သက်တမ်းနှင့် တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ဟာလည်း တစ်နှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လက်ရှိကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူး အပါအဝင် တပ်မတော်သားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များပါဝင်ကာ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွင့်အရေးများနှင့် ကော်မတီရဲ့တာဝန်များအတိုင်း စည်းလုံးညီညွှတ်စွာ ဆွေးနွေး တိုင်ပင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကော်မတီအနေဖြင့် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်မှ ဆက်လက်တာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါကလည်း ကျေပွန်စွာတာဝန် ထမ်းဆောင်ပါမည်ဖြစ်ကြောင်း အစီရင်ခံစာတင်ပြပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဥက္ကဋ္ဌ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေး ကော်မတီ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာကို လွှတ်တော်ကမှတ်တမ်းတင်ကြောင်း ကြေငြာအပ်ပါတယ်။ (တူထုသံ)။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ပထမပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ဖြစ်သော ၁၇.၂.၂ဝ၁၆ရက်နေ့တွင် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီကို အဖွဲ့ဝင်(၁၁)ဦးဖြင့် ဖွဲ့စည်းတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ ယခုအခါ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီသည် ၁၇.၂.၂ဝ၁၇ရက်နေ့တွင် ကော်မတီ၏သက်တမ်း(၁)နှစ် ပြည့်မြောက်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် တိုင်းဒေသကြီး(သို့မဟုတ်)ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ ဥပဒေပုဒ်မ-၂၃အရ သက်တမ်း(၁)နှစ်တိုးမြှင့်ရန် လွှတ်တော်မှသဘောတူပါသလားခင်ဗျား။ (တူပါတယ်)။ သဘောတူပါသလားခင်ဗျား။ (တူပါတယ်)။ သဘောတူပါသလားခင်ဗျား။ (တူပါတယ်)။ သဘောမတူသူများရှိပါသလားခင်ဗျား။ (မရှိပါ)။ လွှတ်တော်မှသဘောတူတဲ့အတွက် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီကို သက်တမ်း(၁)နှစ်တိုးမြှင့်ကြောင်း ကြေငြာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ အစီအစဉ်ရပ်နားကြောင်းနှင့် လွှတ်တော်အစည်းအဝေး အဌမနေ့ကျင်းပမည့် နေ့ရက်နှင့် အချိန်ကိုကြေညာခြင်း
ဥက္ကဋ္ဌ ။ ။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များခင်ဗျား။ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ အစီအစဉ်ရပ်နားကြောင်းနှင့် လွှတ်တော် အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ့ကို ၂၄.၄.၂ဝ၁၇ (တနင်္လာနေ့) နံနက် ၁ဝဝဝ နာရီ အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြေညာပါတယ်။ (တူထုသံ)
ဟ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ အစည်းအဝေးကို (၁၂ဝ၅)နာရီအချိန်ရပ်နားပြီး အစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြ မေးခွန်း(၁၃)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်းနှင့် ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွာရေးကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာအား ဖတ်ကြားတင်ပြခြင်းနှင့် ကော်မတီ၏သက်တမ်း တိုးမြှင့်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။’
ဟ ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး သတ္တမနေ့ကို (၁၂ဝ၅)နာရီအချိန်ရပ်နားပြီးအစည်းအဝေးတွင် ကြယ်ပွင့်ပြမေးခွန်း(၁၃)ခု မေးမြန်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာတိုင်းဒေသကြီးအဆင့် အဖွဲ့အစည်းဝင်များက ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်းနှင့် စီးပွားရေးကော်မတီ၏ နှစ်ပတ်လည်အစီအရင်ခံစာအားဖတ်ကြား တင်ပြခြင်းနှင့် ကော်မတီ၏သက်တမ်းတိုးမြှင့်ခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။’
Previous ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး ဆဋ္ဌမနေ
Next ဒုတိယအကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှန်အစည်းအဝေး အဋ္ဌမနေ
6Tai5Q http://pills2sale.com/ levitra nizagara
How much will it cost to send this letter to ? norvasc nursing implications quizlet They found that afteratragic defeat, fans consumed 16% more saturated fat. That information isnât too newâother studies have linked feelings of dejection and depression with the consumption of junk foods with high calorie counts. A sugary bag of candy sends signals of pleasure to the brain, which helps temporarily relieve suffering.
This site is crazy 🙂 naproxen or ibuprofen for sunburn @12 and 22 Even though this is notalove fest…I dear say it should beareasonable Fest…Lets get real and make fair honest comments, lets rise above personal biases and be objective if that’s possible…oh well maybe its not! A good job isagood job regardless of who does it!
I’d likeaphonecard, please eros dio dell amore The government almost doubled prices for fuel and cookinggas on Monday to bring its budget under control. The ArabAfrican country lost three-quarters of its oil reserves – itsmain source of revenues and of dollars for food imports – whenSouth Sudan became independent in 2011.
Withdraw cash how does hydroxycut gummies work in the body More than one million people tramped over Pavegen tiles as they passed through West Ham underground station en route for the Olympic Park, generating the power required to keep the station's lights on.
Have you gotatelephone directory? buy paxil from canada Heâs still not sure thatâs the life to which he aspires, though, and when Dr. Price offers himanormal life in return for helping to track down and eliminate the Tomorrow People, Stephen doesnât say yes or no.
I’ve gotavery weak signal spring valley green tea with hoodia review Texts also included specific windows of time during which sales would take place onaspecific day, such as the first 15 minutes of the hour, as well as rules on where customers should wait if there wasabottleneck at the apartment.
Can I call you back? buy viagra online canadian When former coworker and overall fairly nice guy Jason Davis came back from his First Drive of the 2014 Fiat 500L, he said it was better than the Kia Soul or any other box car. He genuinely seemed to be enamored with the thing, ugly and awkward as it may be. Not to knock Mr. Davis too much, but he also daily drove some of the harshest-riding, loud sporty cars this side ofaracecar. So I might’ve taken his opinion withafairly large grain of rock salt.
I’d like to tell you aboutachange of address getting off celexa to get pregnant There was no immediate word on how many hunger-striking inmates have “do not resuscitate” orders or when they were signed. State corrections officials did not immediately respond toacall seeking comment.
I’d like to withdraw $100, please dapovar reviews It has filed six friend-of-the-court briefs in theCalifornia Supreme Court this year, compared with five suchbriefs for all of 2012, and three in New York’s highest court,the Court of Appeals, compared with none in 2012.
I’ve just graduated flexeril tylenol interactions Further, the act of copying the books in and of itself violates the law, and copyright holders should at least be compensated, said Rosenthal, who called Google, âa copy shop for the 21st Century.â
We were at school together domperidone medscape dose Apparently referring toaseparate legal ruling on Mondaythat ordered LVMH-owned cosmetics store Sephora toclose its Champs Elysees outlet at9p.m. (2000 GMT) instead ofmidnight, she said, “Late-night labour must remain the exceptionin order to preserve the health and free time of employees.”
I’m sorry, she’s femmed libido The Fox network and the producers of “Glee,” including 20th Century Fox Television, called Monteith an exceptional performer “and an even more exceptional person.” They said he was “a true joy to work with and we will all miss him tremendously.” Lea Michele, Monteith’s “Glee” co-star and real-life girlfriend, asked for privacy upon hearing the news of his death.
What’s the current interest rate for personal loans? diclofenac suppository over the counter uk “Revlon’s reentry into the professional salon channel comesatatime when its U.S. color cosmetics business is treadingwater,” BMO Capital analyst Connie Maneaty said inanote. Shemaintained her “market perform” rating and $25 price target onthe stock.
I can’t hear you very well abilify5mg 28 tablet kullananlar The suicide bomber struckapark in the Qahira neighborhood of Baghdad late Friday night, an area popular with locals, police said. The bomber detonated his explosives inacrowd of people, killing at least 26 people and wounding 55.
This site is crazy 🙂 purchase doxycycline online mastercard The result of this miniaturizing march has been devices that are becoming ever smaller, more powerful, and cheaper. In fact, transistor density has doubled pretty reliably about every 18 months or so since the dawn of the information age — you might know this as “Moore’s Law.”
i’m fine good work ibuprofeno normon 40 mg Fiscally conservative Republicans wanted more cuts in farm program and food stamp spending. Leaders said no amendments would be allowed to the new bill, which they hoped to pass before adjourning for the week on Thursday.
I sing inachoir vegas bomb Isaacson was speaking midday Friday, having stayed up for most of the Night Stroll, an all-nighter that has become the identifying stamp of this festival, which is part academic, part esoteric, deep in musicianship and experimentality and exceptionally vivid.
Withdraw cash secotex bula composio “To date, investor exposure to the climate-themed bonduniverse has been limited to the thematic funds populated bysupranational issuance,” wrote HSBC in its latest report, Bondsand Climate Change: The State of the Market in 2013.
We used to work together amlactin south africa Obviously, the Giants manager had not adhered to the old Bob Lemon philosophy about bad losses. âI never let âem bother me,â Lem said. âI always left âem somewhere inabar on the way home.â On the day after, Bochy was still smarting but his spirits would soon be lifted when the Giants, behind 2012-like air-tight, 12-strikeout pitching from Madison Bumgarner and three relievers not named Romo, stymied the Mets, 2-1. It was their 10th win in the last 15 games, keeping alive the possibility that this might not yet beafirst-to-last situation for them after all.
We were at school together where to buy erythritol sweetener in singapore TOKYO, Oct 15 (Reuters) – U.S. stock index futures tickedhigher on Tuesday on expectations of an imminent deal that willreopen the U.S. government and avertapossible debt default,though the political squabbling in Washington kept markets onedge ahead of the Thursday deadline.
I’d like to order some foreign currency shatavari churna amazon The billboards were initially put up to pitchaprevious election. Detroit City Clerk Janet Winfrey said on Tuesday that the local billboard company on Saturday updated the signs to highlight the general election, but with the erroneous September date.
Just over two years intimina kegelsmart “This is why we have introducedanew Chief Inspector for Social Care who will hold local areas to account for abuse. We are also currently considering new measures to make directors of care homes and hospitals that allow neglect and abuse to take place personally and criminally accountable for failures in care.”
I don’t know what I want to do after university how much does celexa cost at cvs He said the military officers responsible for operations in Afghanistan had assured him there had been no unlawful monitoring of Stephenson by New Zealand. “This includes asking foreign organizations to do this on our behalf,” he said.
What’s the exchange rate for euros? clindamycin phosphate 1.2 /tretinoin 0.025 gel “The process has gained momentum of late, but it would be amiracle ifadecision could be reached within the next couple ofdays,” the source said on condition of anonymity because thetalks are confidential.
I’m sorry, he’s ghr1000 “It rides better thanks to its unique rear coil spring suspension,” the magazine said of the Ram. It also said the interior was more comfortable than the Silverado’s, includinga“friendlier” control layout.
I like italot isotretinoin for very mild acne Whereas Jets assistants who enjoyed Division I or NFL careers were shown on video in those uniforms, Ryan would slip his old roommate into trick plays in training camps. He would then show the team video clips of his practice performances.
4u1uDN http://pills2sale.com/ viagra cialis buy
6xZ4n8 https://www.quora.com/What-the-top-SEO-keywords-for-essay-you-know/answer/Alan-Smith-1772 write my essay
w6qN8L http://xnxx.in.net/ xnxx videos
yPCGlP http://waldorfdollshop.us/ waldorf doll